March 2011 ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
(မသန်မစွမ်းသူများကဏ္ဍ) , အမျိုးသမီးရေးရာကဏ္ဍ
သမားတော်ဆရာလေး မဟာမွတ်၏ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အကျဉ်းနှင့် တိုင်းရင်းမြန်မာဆေး သမိုင်းဖြတ်သန်းမှု ဘဝတကွေ့မှတ်တမ်း
by Lu Bo on Thursday, March 31, 2011 at 5:49pm
အမည် - မဟာမွတ်
မွေးသက္ကရာဇ် - ၁၉၅၇ ခုနှစ်
မိဘအမည် - ဦးရာဇတ်၊ ဒေါ်ဟာဘီဇာ
မွေးချင်းမောင်နှမ - ၁ဝယောက် (အကြီးဆုံး)
ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ - အစ္စလာမ်
မွေးဖွားရာဒေသ - ထုံးကြီးကျေးရွာ၊ ကဝမြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ။
ငယ်စဉ်ဘဝ အားငယ်ရ ပညာရှာရာ အနည်းငယ်မျှ
မိဘညီအကို မောင်နှမများနှင့် အတူတကွနေထိုင်ရန် အခွင့်မသာ အဖိုးအဖွားနှင့်သာကြီးပြင်းခဲ့ရပြီး အသက်(၉)နှစ်သားအရွယ်တွင် အဖွား၏မျိုးနွယ်ဒေသဖြစ်သော ကရင်ပြည်နယ် ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့သို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ရစဉ် အခြေခံမူလတန်းပညာ (၃)တန်းအရောက် ကျောင်းဆက်မတက်တော့ဘဲ မွန်ပြည်နယ် ကျိုက်မရောမြို့မှ လူအများယုံကြည်ကိုးစားရာ ဆရာကြီး “မာပေါ်ရှား”၏နောက် တကောက် ကောက်လိုက်ပါရင်း လောကီပညာရပ်များကို အသက်(၁၄)နှစ်အချိန်မှစတင်၍ သင်ယူတက်မြောက်ခဲ့ပါ သည်။
သမ္မတသစ်ဦးသိန်းစိန် အစိုးရအဖွဲ့ကို မိန့်ခွန်းပြောကြား
by ဆန်း သစ် on Friday, April 1, 2011 at 1:25am
မတ် ၃၀ ရက်နေ့က ရာထူး လက်ခံခဲ့တဲ့ သမ္မတသစ် ဦးသိန်းစိန်က မတ် ၃၁ ရက် မနက်မှာ အစိုးရအဖွဲ့အစည်း အသီးသီးက အကြီးအကဲများ၊ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များကို မိန့်ခွန်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ မိန့်ခွန်းထဲက အရေးကြီးတဲ့ အချက်များကို အခုလို စုစည်း တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
သမ္မတသစ်က နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေး ကောင်စီက သမ္မတနဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များရဲ့ လစာကို သတ်မှတ် ပေးထားပြီး ဖြစ်ပေမယ့် နိုင်ငံတော်ရဲ့ ငွေကြေး အခြေအနေ၊ နိုင်ငံသားများရဲ့ အကျိုးကို ရှေ့ရှုပြီး လစာနှုန်းထား အသစ်များကို ခံစားခြင်း မပြုဘဲ ယခင်နယက လက်ထက်က သတ်မှတ်ထားတဲ့ လစာများအတိုင်းဘဲ ခံစားမယ်လို့ ကြေညာ သွားပါတယ်။ ယခင် လစာဟောင်းက သမ္မတ (နယက ဥက္ကဌ) ၁၂ သိန်း၊ ၀န်ကြီး ၆ သိန်း၊ ဒုဝန်ကြီး ၄ သိန်းဖြစ်ပြီး လစာနှုန်းသစ်က သမ္မတ သိန်းငါးဆယ်၊ ၀န်ကြီး သိန်းသုံးဆယ်၊ ဒုဝန်ကြီး သိန်း ၂၀ ဖြစ်ပါတယ်။
by ဘို Bo on Friday, April 1, 2011 at 3:11am
လွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံ ကြာသပတေး မနက်
ဒီတပတ်မှာတော့ နမူနာအနေနဲ့ ကျနော်တို့ အရှေ့တိုင်းနဲ့အာဖရိကကျောင်းမှာ သင်တဲ့ မြန်မာသမိုင်းသင်ရိုးတွေအကြောင်း ပြောပါ့မယ်။ ဒီလို နယ်မြေဒေသလေ့လာရေးကျောင်းတွေကို ကိုလိုနီနိုင်ငံတွေက သူတို့အုပ်ချုပ်ရေးဝန်ထမ်းတွေ ဘာသာစကားနဲ့ ဒေသအကြောင်းလေ့လာဘို့ နောက် ကိုလိုနီအုပ်ချုပ်ရေးမှာ အကျိုးပြုဘို့ သုတေသနဌာနတွေအနေနဲ့ စတင်ခဲ့ကြတာပါ။ ပြင်သစ် ဂျာမနီ နယ်သာလန် အမေရိကန် ရုရှစတဲ့နိုင်ငံကြီးတွေမှာ ဒီလိုဌာနတွေ ရှိပါတယ်။ မြန်မာစာ မြန်မာမှုကိုလေ့လာတာတွေလဲ ဒီနိုင်ငံ ဒီဌာနတွေမှာ ရှိဆဲပါ။ အထူးသဖြင့် လန်ဒန်အရှေ့တိုင်းကျောင်းနဲ့ ယေးလ်တက္ကသိုလ်ဟာ မြန်မာဘာသာကို စနစ်တကျ သဒ္ဒဗေဒနည်းစနစ်ကို လေ့လာရာမှာ ကနဦးကျပါတယ်။ သမိုင်းဘာသာမှာလဲ လန်ဒန်ကျောင်းရဲ့အရှိန်ဟာ ဒေါက်တာသန်းထွန်းသြဇာကြီးတဲ့ မြန်မာပြည်သမိုင်းလောကမှာ ကျန်နေဆဲပါ။
တပ်ချုပ်ကြီး၏ အစိုးရအသစ် အတွက် အမှာစကား
ကျွန်ူပ်တို့ လက်ထက်တွင် ပြည်သူလူထု ငတ်မွတ်ခေါင်းပါး စေရုံသာ မက အစာရေစာ ပြတ်လတ်ကာ မြန်မာလူမျိုးများအား အမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းရန် အတွက် ကြိုးစားခဲ့သော်လည်း အစာငတ်၍ သေသူ အရေအတွက်မှာ လွန်စာ နည်းလွန်းလှ၍ များစွာ စိတ်မချမ်းမသာ ဖြစ်ခဲ့ရသည် ။ သို့သော်လည်း ကျွန်ူပ်တို့ အစပျိုး ဆောင်ရွက်မှုကြောင့် ပြည်သူလူထု ဆင်းရဲဒုက္ခ ရောက်နေရသည့် မြင်ကွင်းများမှာ များစွာ ပီတိ ဖြစ်စရာ ကောင်းလွန်းလှပါသည် ။ ဘယ်တော့မှ ငတ်၍ မသေပါဆိုသည့် မြန်မာနိူင်ငံသားများအား လက်တွေ့ သတ်သေ ပြနိူင်ဖို့ အတွက် ကျွန်ူပ် ကိုယ်စား တိုင်းပြည်ကို ပိုမို ပျက်စီးအောင် လုပ်ဆောင် ဖို့ ကျွန်ူပ်ကိုယ်တိုင် သေချာစီစစ် ရွေးချယ်ထားသည့် အစိုးရ အသစ်အနေဖြင့် ဆက်လက် အကောင်အထည်ဖော် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက် ကြရန် ဦးသိန်းစိန် ခေါင်းဆောင်သော အရေခွံလဲ အစိုးရအား အထူးမှာ ကြားလိုပါသည် ။ တိုင်းပြည်ကို ဖျက်စီးသည့် နေရာ၌ ပြိုင်စံရှားသည့်ကျွန်ူပ်၏ လုပ်ရပ်များကို အတုယူ နမူနာထားပြီး အလုံးစုံ ပျက်သုဉ်းသည် အထိ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်ကြဖို့ အလေးအနက် တိုက်တွန်းလိုပါသည် ။
စစ်ဦးဘီလူး ယက္ခဗျူဟာ အိုဘယ့်ကျမ်းလာ
Send Message View သီဟပျံချီ's blog
(ရေးသားရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်။ ။စစ်ဦးဘီလူး ယက္ခဗျူဟာစာအသုံး ဘလော့ဂါတစ်ယောက် သုံးသည်ကို သတိထားမိသဖြင့် ယင်းအသုံးနှင့်ပတ်သတ်ပြီး အကျယ်အားဖော်ပြပါက နှောင်းလူတို့ အကျိုးများမည်ဟု ယူဆမိသည့်အတွက် တတ်အားသမျှ ကြိုးစားတင်ပြလိုက်ရသည်။အမှားရှိပါက ပညာရှင်များ ပြုပြင်သုတ်သင်ဝေဖန်နိုင်ပါသည်)
စစ်ဦးဘီလူး ယက္ခဗျူဟာတွင် ပါရှိသည့် စစ်ဦးဆိုသည်မှာ စစ်ဖျား၊စစ်လျင်ဟုလည်း ခေါ်ဆိုပြီး “စစ်ဦးခေါင်း”ဟူ၍လည်း ၀ိဂြိဟ်ပြုကြသေးသည်။ဗိုလ်ချုပ်(ဖခင်အောင်ဆန်း)က စစ်ဦးခေါင်းနှင့်ပတ်သတ်ပြီး “စစ်ဦးခေါင်း(သို့)စစ်ဖျားစစ်လျင်မှာ ကင်းထောက်ရှေ့ပြေးတပ်သဖွယ်ပင်ဖြစ်သည်။ယခုအခါတွင် ထိုစစ်လျင်စစ်ဖျားနေရာကို လေတပ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ယန္တယား Tank အပေါ့စားတပ်ဖြင့် လည်းကောင်း စေလွှတ်ပေမည်။သို့သော် သဘောမှာ အတူတူအလိုပင်ဖြစ်ပေသည်”ဟု ဗိုလ်ချုပ်၏ သေနင်္ဂဗျူဟာကျမ်း ဥယောဇဉ်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
'' အပါယ်လေးပါး၊ ကပ်သုံးပါး၊ ရပ်ပြစ်ရှစ်ပါး၊.
Khin Win 10:09pm Mar 31
'' အပါယ်လေးပါး၊ ကပ်သုံးပါး၊ ရပ်ပြစ်ရှစ်ပါး၊ ရန်သူမျိုးငါးပါး၊ ၀ိပတ္တိတရားလေးပါး၊ ဗျသနတရားငါးပါး၊ အနာမျိုး ၉၆ ပါးတို့မှ ကင်းလွတ်ငြိမ်းသည်ဖြစ်၍ မဂ်တရား၊ ဖိုလ်တရား နိဗ္ဗာန် တရားတော်မြတ် ကို ရရပါလို၏ အရှင်ဘုရား'' ဟူသော သြကာသ ကန်တော့ချိုး၏ နောက်ဆုံးအပိုဒ် ဆုတောင်းခန်း သည်....ယခုလအတွင်း ကပ်ဘေးတွေ မြင်ခဲ့ရတော့ ကျွန်တော့် ခေါင်းထဲရောက်လာသည်။
Author: lubo601 | 7:18 AM | No မှတ်ချက် |
“လူငယ်တန်ဖိုး” အကြောင်း ရေးပေးပါဆိုတော့ အတော်ဝန်လေးနေတယ်။ ရေးစရာ ပြောစရာမရှိလို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ရေးစရာ ပြောစရာတွေ များနေလို့ပါ။
“လူငယ်” ဆိုတာ ဘယ်အသက်အရွယ်ကို ပြောတာလဲ? ဆိုတဲ့ ပြောရိုးပြောစဉ်စကားနဲ့ စရမယ် ထင်ပါတယ်။ ဟောပြောပွဲတွေမှာလဲ မေးလေ့ရှိတယ်။ ပရိသတ်ကတော့ ထုံးစံအတိုင်း သတ်မှတ်ချက်တွေကို ပြောကြတယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ့်ရဲ့အဖြေကို ပြောပြဖြစ်တယ်။ “အသက်(၈၀)အောက်ကို ဆိုလိုတာ”ဆိုတော့ သူတို့က ရီကြတယ်။ ကိုယ်က အသက်(၅၀) နဲ့ (၆၀) ကြား ရောက်နေပေမယ့် အသက် (၇၀) ကျော်တွေ တန်းစီနေတဲ့နေရာမှာ ငယ်သေးလို့ဆိုပြီး ငြင်းပယ်ခံရတာတွေက အများသား။ ဒါပေမယ့်လဲ ကိုယ့်အတိုင်းအတာနဲ့ ကိုယ်ပြောရရင် ကိုယ်လုပ်ခွင့်ရတာတွေ အများကြီးပဲ။
Author: lubo601 | 7:11 AM | 1 Comment |
[By Thu Thu Lay ]
Author: lubo601 | 9:35 AM | No မှတ်ချက် |
ဘာအံ တက္ကသိုလ်ရဲ့တက္ကသိုလ်ဖွင့်စ ရက်လေးတစ်ရက်မှာ ကိုယ်သွားရမဲ့ လက်တွေ့ ခန်းက ဘယ်နေရာမှန်းကို မသိတဲ့ အူတူတူ အတတ ရုပ်လေးထွက်နေတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်က ဘေးဘီကို ငေးမောရှာဖွေနေမိသည်..။ တစ်ယောက်ယောက်ကို လှမ်းမေးရအောင်လဲ အားလုံးက သူ့ အဖွဲ့ လေးနဲ့ သူ စကားဖောင်ဖွဲ့ နေကြတဲ့ ရွယ်တူတွေကြား တစ်ယောက်ထဲ မဝံ့ မရဲ အားငယ်စွာနှင့် မေးဖို့ ရန် မရဲဝံ့လှတာကြောင့် လျှောက်နေတဲ့ ခြေလှမ်းအတိုင်းသာ လျှောက်နေမိ၏...ဘေးဘီဝဲယာ ငေးကြည့်နေရင်းပဲ ကံ့ကော်ပင်အောက်က ထိုင်ခုံမှာ တစ်ယောက်ထဲ ထိုင်နေသူတယ်ယောက်ကို တွေ့ မိတာကြောင့် ဝမ်းသာအားရနှင့် ထိုသူကိုပဲ မေးမြန်းရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီး ပါဝါတစ်ထောင်ကျော်လုလုနီးပါးဖြစ်နေတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ပုလင်းဖင်လောက် ထူထဲနေသော မျက်မှန်ကို ပင့်တင်ရင်း သူမရှိရာသို့ခြေလှမ်းကို ပြင်ဆင်လိုက်၏..။
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ် တပ်ဦးနှင့်ကျမ၏ ကိုယ်တွေ့မှတ်တမ်းဒိုင်ယာယီ အပိုင်း ( ၃ )
by Robina Lwin on Tuesday, March 29, 2011 at 4:35pm
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ် တပ်ဦး (ABSDF) အစောပိုင်းကာလနှင့်ပက်သက်သောကျမ၏၊ ကိုယ်တွေ့ မှတ်တမ်း ဒိုင်ယာယီ အပိုင်း ( ၁ ) နှင့် အပိုင်း( ၂ ) ကိုရေးသားခဲ့ပြီးနောက်၊ ယခု အပိုင် (၃ ) ကို ဆက်လက်တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည် ။ အပိုင်း (၃ )ပြီးပါက ရပ်နားလိုက်မည်ဖြစ်ပါသည်။
အစောပိုင်းကျောင်းသားများထွက်လာခါစက ၊ ရှုပ်ရှက်ခက်နေသောအခြေအနေများနှင့်၊ (မကဒတ) ဗဟိုကော်မတီ ဖွဲ့ စည်းပြီးစ အခြေအနေများတွင် စံနစ်တကျ မလုပ်ဆောင်နိုင်ကြသေးသော်လည်း၊ နောက်ပိုင်းတွင် တဖြည်းဖြည်းဗဟိုကော်မတီနှင့် စခန်းများအားလုံး ညှိနှိုင်း လုပ်ဆောင်မှုကြောင့်၊ ကျစ်လစ်ခိုင်မာသောအဖွဲ့ အစည်းတခု အသွင်ပြောင်းလဲ လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီဖြစ်သောကြောင့်၊ နောက်ပိုင်းသမိုင်းမှတ်တမ်းများမှာလည်း ၊ (မကဒတ) ဗဟိုကော်မတီမှ စုဆောင်းတင်ပြထားသော ၊ မှတ်တမ်းများနှင့် ဆက်စပ်တူညီနေမည်သာ ဖြစ်သည်။
အစိုးရသစ်ကို အရှိအတိုင်း NLD လက်ခံ
Author: lubo601 | 8:59 AM | No မှတ်ချက် |
by Voa Burmese on Wednesday, March 30, 2011 at 9:32am
အခုလက်ရှိ အစိုးရသစ် ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့အပေါ် နိုင်ငံရေးပါတီတွေ၊ နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်းတွေကရော ဘယ်လို တုံ့ပြန် ပြောဆိုကြသလဲဆိုတာ နော်ရှိုးက တင်ပြပေးထားပါတယ်။
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို အစကတည်းကနေ တောက်လျှောက် သပိတ်မှောက်လာတဲ့ NLD အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က အခု ဒီရွေးကောက်ပွဲကနေပဲ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့၊ ဒီနေ့ကြေညာတဲ့ အစိုးရသစ်ပေါ်မှာ ဘယ်လိုသဘောထားလဲဆိုတာ သိရအောင် မေးကြည့်တော့ ဦးဉာဏ်ဝင်းက အခုလိုပဲ တိုတိုတုတ်တုတ် ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
Author: lubo601 | 8:30 AM | No မှတ်ချက် |
မိုးရာသီတွင် ဖြစ်ပွားတတ်သော အရေပြားမှိုရောဂါများ
Author: lubo601 | 8:07 AM | 1 Comment |
by ဆေးလောက on Friday, March 25, 2011 at 10:19pm
“မှိုက မစိုမခြောက် အခြေအနေကို သဘောကျတယ်။ မိုးတွင်းကျတော့ မိုးရွာတဲ့အချိန်မှာ မိုးရေစိုမယ်၊ မရွာတဲ့အချိန်တွေကျတော့ ချွေးတွေနဲ့ဆိုတော့ အရေပြားကို နှူးသလိုဖြစ်ပြီး ဒီလို မိုးတွင်းအချိန်မှာ အဖြစ်များတတ်ပါတယ်”
ဘာလဲ stock, stock market ဆိုတာ ?
Author: lubo601 | 7:46 AM | No မှတ်ချက် |
by Chan Myae on Wednesday, March 30, 2011 at 12:50am
Filed Under Capital Market, Education, Stock
ငယ်ငယ်လေးတည်းက စာရေးသူ ဒီမေးခွန်းကို မေးဖူးပါတယ်။ stock ဆိုတာဘာလဲ။ ဘာလုပ်လို့ရသလဲ။ stock နဲ့စီးပွားရေးနဲ့ ဘယ်လိုပတ်သက်လို့ သူ့ကြောင်းပြောနေရတာလဲ စသဖြင့်ပါ။ စာပုဒ်လေးကို ရေးရတဲ့ အကြောင်းအရင်း ကတော့ စာရေးသူလိုပဲ သိချင်တဲ့သူတွေအတွက် ရည်စူးပါတယ်။ ဒီအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီးလဲ အကျယ်တ၀င့် ရေးသွားမှာပါ။
"တစ်နေ့နေ့ဆိုတဲ့ အချိန်မှာ .
Author: lubo601 | 7:40 AM | No မှတ်ချက် |
[By Ko Myoe]
ဒီနေ့ ကျွန်တော်တို့မှာ အိမ်ကြီးကြီးတွေ ရှိကြတယ်။ ဒါပေမယ့်
အဆင်ပြေမှုတွေ ပိုများလာတယ်၊ ဒါပေမယ့် အချိန်တွေ နည်းကုန်ကြတယ်။
ကျွန်တော်တို့မှာ ဘွဲ့လက်မှတ်တွေများများ ပိုင်ဆိုင်လာတယ်၊ ဒါပေမယ့်
ဗဟုသုတတွေ များလာတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဝေဖန်ပိုင်းခြားမှုတွေ နည်းလာတယ်။
ကျွန်တော်တို့မှာ တတ်ကျွမ်းသူတွေ များများရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြဿနာတွေ
ဆေးတွေ များများစားစား ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျန်းမာရေးကောင်းတဲ့သူတွေ နည်းလာတယ်။
“မြူးကြွတဲ့ တေးသံပျံလွင့်လို့နေ … ကူးပြောင်းစ တန်ခူးလေမှာ … တယောက်တလှည့်မို လှမ်းကာ ဖျန်းပက်ကြစဉ် … ပိတောက်ဖူး လေးတွေ ပန်ဆင်ထားသူရေ …” ဆိုတဲ့ စာသားလေးကို တွေ့လိုက်ရတော့ ဘာလိုလိုနဲ့ မကြာခင် သင်္ကြန်ကျတော့မယ် ဆိုတာ သတိထားမိတယ်။
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပန်းပိတောက်နဲ့ မြူးကြွကြွ ရိုးရာသင်္ကြန်ကို လှပတဲ့ ရာသီဘွဲ့လေးဖြစ်အောင် ဖွဲ့ဆိုခဲ့တဲ့ ကိုမောင်မောင်ကတော့ သူချစ်တဲ့ဂီတ လောကကြီးကို စွန့်ခွာသွားတာ ၁၆ နှစ်ရှိပါပြီ။ သေသောသူ ကြာရင်မေ့ဆိုပေမယ့်လည်း သူဖန်တီးခဲ့တဲ့ ဂီတအပေါ်မှာ ယစ်မူးခဲ့ရတဲ့သူတွေ၊ မြတ်နိုးခဲ့ရတဲ့ သူတွေကတော့ မမေ့နိုင်သေးပါဘူး။
ကျနော်ဒီဘာသာရေးစာတွေဘဲ တင်လို့တမျိုးတော့မထင်စေချင်ဘူး။ ကျနော့်ဘာသာသာသနာအတွက် အုပ်တချပ်သဲတပွင့်မဟုတ်ရင်တောင် ဖုန်မှုန့်လေး
"စကားတစ်ခွန်းက ဘဝတစ်ခုကို ပြောင်းလဲစေသည်"
[By Alex Aung Lin]
ကြက်ပျံမကျ စည်ကားတဲ့ ပွဲခင်းတစ်ခုမှာ မိခင်တစ်ဦးက ၅ နှစ်သား ကလေးငယ်ကို ရောင်စုံ မိုးပျံပူစီဖောင်းတစ်လုံး ဝယ်ပေးခဲ့တယ်။
ကလေးငယ်က ပူစီဖောင်းက ကြိုးသေးလေးကိုကိုင်ပြီး ပွဲခင်းထဲမှာ ခုန်ဆွခုန်ဆွနဲ့ ပျော်နေခဲ့တယ်။
ပွဲခင်းထဲမှာ ပြေးလွှားကစားရင်း မမျှော်လင့်ဘဲ လက်ထဲက ပူစီဖောင်း လွတ်သွားခဲ့တယ်။
ရုတ်တရက်မို့ ကလေးငယ်က အံ့သြတုန်လှုပ်ပြီး ကောင်းကင်ပေါ်တက်သွားတဲ့ ပူစီဖောင်းကိုကြည့်ပြီး နှမြောတသနဲ့ ငိုမဲ့မဲ့ဖြစ်နေခဲ့တယ်။
Author: lubo601 | 7:02 AM | No မှတ်ချက် |
Author: lubo601 | 6:59 AM | No မှတ်ချက် |
Author: lubo601 | 6:54 AM | No မှတ်ချက် |
လက်ကိုင်ဖုန်းဆိုလို့ ''လက်က မကိုင်လို့ ခြေနဲ့ကိုင်ရမှာလားကွ''လို့တော့ မပြောကြပါနဲ့။ HANDPHONE ကို တိုက်ရိုက် မြန်မာမှု ပြုလိုက်တာပါ။ တချို့ ဘိုလိုရေးတဲ့ လိပ်စာကဒ်ကြားတွေမှာ MOBILE ဆိုထည့်တာလည်း
တွေ့ဖူးပါတယ်။ ခေါင်း စဉ်ကို မြန်မာဆန်ဆန် ရေးချင်လို့ လက်ကိုင်ဖုန်းလို့ ရေးမိတာပါ။ အမှန်တော့ ဖုန်းဆိုတာ မွေးစားတာကြာလို့ သားသမီးအရင်းလို ဖြစ်နေတဲ့ အင်္ဂလိပ် စကားလုံးပါပဲ။ ရှိပါစေတော့။ ဟိုမှာဒီမှာ လွယ်လွယ်ကူကူး ရေးကြတဲ့ မျက်စိထဲအမြင်များနေပြီဖြစ်တဲ့ ဟန်းဖုန်း စကားလုံးနဲ့ပဲ ခရီးဆက်ပါရစေ။
ထင်းစည်းတစည်းနဲ့ သာဓက ပြ …
လေဗူဘောင်း တွဲတွေ ….
မုန့်လေပွေ ထပ်တွေ ….
Face Book မှ သိလိုက်ရသော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကို ဂျပန်တွေ ဘယ်လိုရင်ဆိုင်သလဲ
by May Thingyan Hein on Monday, March 21, 2011 at 9:32pm
ကျွန်မ facebook သုံးတိုင်း အချိန်ကုန်တယ်လို့ ကျွန်မခင်ပွန်းသည်က အပြစ်တင်လေ့ရှိသည်။ အရင် အင်တာနက် သုံးချင်ရင် အင်တာနက်ကဖေး ပြေးခဲ့ရပေမဲ့ ခုလို Elite ကုမ္ပဏီက ငါးသိန်းတန် မိုဘိုင်းဖုန်းနှင့် အင်တာနက် သုံးစွဲနိုင်အောင် ၀န်ဆောင်မှုပေးတော့လည်း ကျွန်မမှာ ၀မ်းမြောက်စွာဖြင့်ပင် EVDO 3G MODEN ၀ယ်သုံးခဲ့သည်။ သုံးစက အင်တာနက် လိုင်းကောင်းသောကြောင့် ကိုယ့်အသိတွေကိုတောင် ငါးသိန်းဖုန်းနဲ့ အင်တာနက်သုံးကောင်းကြောင်း ကုမ္ပဏီကို အခမဲ့ ကြော်ငြာပေးခဲ့မိသေးသည်။ ခုတော့လည်း ကျွန်မမှာ အဲလို တွေ ကြော်ညာမိတဲ့အတွက် အပြစ်ရှိသူလို ခံစားနေရသေးသည်။
"သင်ခန်းစာ အထပ်ထပ်အောက်က ကွက်လပ်များဆဲတော်လှန်ရေး”".
[By Minwunna Aung]
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကိုလိုနီဆန့်ကျင်ရေး၊ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေး၊ အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေး တော်လှန်ရေး သမိုင်းဖြစ်စဉ် တွေမှာ အားနည်းချက်အားကောင်းချက်၊ အမှား အမှန် စတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး သင်ခန်းစာတွေထုတ်ယူခဲ့ကြ၊ ပြုပြင် ပြောင်းလဲခဲ့ကြ၊ အသစ်တည်ထွင် ကြံဆခဲ့ကြသလို ညီညွတ်ရေးပြိုကွဲခဲ့ကြ၊ ပြန်လည်တည်ဆောက်ညီညွတ်ခဲ့ကြတဲ့ ဖြစ် စဉ်တွေကို ထင်ထင်ရှားရှားတွေ့မြင်ခဲ့ကြပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ သမိုင်းခေတ်ကို ကိုယ်တိုင်ဖြတ်သန်းခဲ့သူတွေ၊ ကိုယ်တိုင်မဖြတ် သန်းခဲ့ရပေမယ့် လေ့လာစူးစမ်းစိတ်ဝင်စားရင်း လွတ်လပ်ရေးရပြီးကာလနောက်ပိုင်း နိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲတွေ တော်လှန်ရေး တွေ လူထုအုံကြွမှုတွေမှာ ပါဝင်ဖြတ်သန်းခဲ့ကြ၊ ဖြတ်သန်းနေကြဆဲ သူတွေအများကြီးရှိကြပါတယ်။
Author: lubo601 | 8:20 AM | No မှတ်ချက် |
လူတွေကို အတန်းအစားခွဲခြားမယ်ဆိုရင် ရွှေလိုလူ၊ ငွေလိုလူနဲ့ ကြေးနီလိုလူတွေရယ်လို့ ပိုင်းခြားနိုင်တဲ့အကြောင်း ဒဿနဆရာကြီး ပလေတိုက မိန့်ဆိုဖူးသည်။ အီတာလျံဘောဂ ဗေဒပညာရှင် ဗီလ်ဖရီနိုပါရီတိုကမူ တိုးတက် ဖြစ်ထွန်းမှုအများစု၏ အကြောင်းရင်းခံမှာ အ နည်းငယ်မျှသာ မရှိမဖြစ်လူတချို့ကြောင့်ဟု ငြင်းခုံအဆိုပြုခဲ့ဖူးသည်။ ဒီလိုအယူအဆများက ယနေ့ခေတ်လူအများစုကြီးကြားမှာ ပျံ့နှံ့နေ သည် ထိုကဲ့သို့ခါင်းဆောင်သူလူတန်းစား သို့ တည်းမဟုတ် အနည်းငယ်မျှသော မရှိမဖြစ် လူများအား နိုင်ငံရေးသမားများက အန္တာရာယ် ကောင်စာရင်းသွင်းကြသည်။
ပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးကဏ္ဍတွင်မူ ပို၍သိ သာသည် ကမ္ဘာပေါ်မှ အကောင်းတကာ့အ ကောင်းဆုံး ကုမ္ပဏီများသည် သူတို့ရရှိထားသော မရှိမဖြစ်လူအနည်းငယ်(The Vital Fews)ကို လွတ်ထွက်မသွားစေဖို့ ထိန်းထားသည်။ နောက်ထပ်တွေ့အောင်လည်း ထပ်ရှာကြသည်။ ထိုကဲ့သို့ လူမျိုးရလျှင် လစာရိက္ခာအထောက် အပံ့ မြိုးမြိုးမြက်မြက်ကလေးပေးထားပြီး၊ အပို ဆောင်းလေ့ကျင့်မှုများ၊ စွမ်းအင်ရှိသောအကြီး တန်းအရာရှိများဖြင့် ပျိုးထောင်ယူသည်၊ ပြီး တော့ အစွမ်းပြမှရမည့် တာဝန်များကို ပေး သည်။ မည်သို့ဆိုစေ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလော ကထဲမှာ ထိုသို့သော မရှိမဖြစ် လူအ နည်းငယ်သို့မဟုတ် ပါရမီပါလာသူ များကိုပို၍ စွဲလမ်းတောင့်တ လာခဲ့ကြသည်။
Author: lubo601 | 8:08 AM | No မှတ်ချက် |
ဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်ကို မြင်တာနဲ့ သူ့ရဲ့ အတွင်းသဘောကို ခန့်မှန်းမိကြမှာပါ။ ဘယ် ကိစ္စမှာမဆို ဘယ်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးမဆို ပန်းတိုင်ဆိုတာ ရှိတတ်ပါတယ်။ အဲဒီပန်းတိုင်ကို ရည်ရွယ်ပြီး ကြိုးပမ်းလျှောက်လှမ်းရတာတွေ လည်း ရှိပါတယ်။ ဒါမှသာ အောင်မြင်ပြီး ဆန္ဒ ပြည့်ဝပေမပေါ့။
တစ်ခါတစ်ခါတော့ လူတွေဟာ ပန်းတိုင် ပျောက်နေတတ်တယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒအမှန်ပါ ဝေ ဝါးတိမ်မြုပ်နေတတ်တယ်။ ဒီတော့ ကိုယ်လျှောက် ချင်တဲ့လမ်းဟာ ပျောက်သွားတတ်သလို ကိုယ့် ရဲ့ပန်းတိုင်ဟာလည်း ဘာမှမန်းမသိတော့ဘဲ ရည်ရွယ်ချက်တွေ မဲ့သွားတတ်တာ အမှန်ပဲ။ ပန်းတိုင်ကိုမမြင်ဘဲ လျှောက်နေတာမျိုးဟာ မျက်ကန်းလမ်းလျှောက်တာမျိုးပဲ မဟုတ်လား။ ဦးတည်ချက်မရှိဘဲ ဘယ်ရောက်ရောက် ဘယ် ပေါက်ပေါက် သွားနေတာနဲ့ တူသွားလိမ့်မယ်။
"﻿ မှားယွင်းသော စီမံခန့်ခွဲမှု".
မှားယွင်းသော စီမံခန့်ခွဲမှုကို “Mismanagement”ဟု သိကြသည်။ တစ်ဦးချင်းစီမှသည် အဖွဲ့အစည်းများ အလယ်၊ နိုင်ငံအဆုံး အတော်ပင် အလေးအနက်ထားရမည့် အရာ၊ အရေးကြီးသော အဓိကအချက် ဖြစ်သည်။
စီမံခန့်ခွဲသူများသည် မူ ၀ါဒရေးဆွဲသူများ၊ မဟာဗျူဟာ ရုပ်လုံးဖော်ကြသူများ ဖြစ်သဖြင့် မူလကတည်းက မှားယွင်းမှု ရှိနေလျှင်၊ အကောင်အထည်ဖော်ရာ၌ မျှော်မှန်းထားသော ရည်မှန်းချက်သို့ မည်သည့်အခါမှ ရောက်ရှိမည် မဟုတ်ချေ။ ဦးဆောင်သူများသည် စီမံခန့်ခွဲသူများ ဖြစ်သည်။ လမ်းကြောင်းပေးသူများလည်း ဖြစ်၏။ အခြေအနေအမှန် တစ်ရပ်ကို ကောင်းစွာသိရှိ သုံးသပ်နိုင်မှု၊ ရေရှည် အကျိုးစီးပွား ရရှိနိုင်မှု၊ နောက်လိုက်များကို ပြုပြင်နိုင်မှု၊ မိမိမူဝါဒ၏ အကျိုးအပြစ်များကိုကောင်းစွာ ထဲထဲဝင်ဝင် သိရှိနိုင်မှု၊ ကမ္ဘာကြီး၏လားရာနှင့် အရာရာကို ခြုံငုံမြင်နိုင်မှု စသော အရည်အသွေးများရှိရန် လိုသည်။
"အားလုံးအတွက် ပညာရေး (၂)".
[By Kyi Win]
ဘ၀ရှေ့ခရီးကို ယုံကြည်မှု ပြည့်ပြည့်၀၀ အာမခံချက်ကောင်းကောင်း (security) ဆက်လက် လုပ်ဆောင်သွားရာမှာ ဘာတွေရွေးလို့ ဘာတွေပယ်မယ်၊ ဘာတွေ ဦးစားပေးရမယ် ဆိုတဲ့ အရေးကြီး ပြဿနာပုစ္ဆာတွေ ဖြေရှင်းစရာတွေ ရှိပါတယ်။ဒီလို ဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေကို ပြတ်သား ကြည်လင်စွာ သရုပ်ဖော်ပြလိုက်တဲ့ (opinion survey) ကွင်းဆင်းလေ့လာချက်ရဲ့အစီရင်ခံစာတစ်ခု မကြာသေးခင်က ထွက်လာတယ်။ စိတ်ဝင်စားဖွယ်လဲကောင်း၊ လူတွေ (society)ရဲ့ အနာဂတ်ရဲ့ ရှေ့ပြေးပုံရိပ်တွေကို ရေးရေးမြင်လာအောင် လုပ်ပေးလိုက်တဲ့ ကားချပ်တစ်ခုလို့ ခေါ်နိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။
ကွင်းဆင်းသုတေသနမှာပါတဲ့ တိုင်းပြည်တွေကတော့ မလေးရှား၊ စင်ကာပူ၊ ထိုင်း၊ ဟောင်ကောင်၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ တရုတ်ပြည်တို့ ဖြစ်တယ်။
Author: lubo601 | 9:21 AM | No မှတ်ချက် |
by Myanmar Youth Network on Friday, October 22, 2010 at 1:15pm
‘ငြိမ်းချမ်းရေးကို အတင်းလုပ်ယူ၍မရ၊ အပြန်အလှန်နားလည်မှုဖြင့်သာ တည်ဆောက်နိုင်သည်’ ဟူ၍ ကမ္ဘာကျော်ရူပဗေဒပညာရှင်နှင့် အဏုမြူစွမ်းအင်ဖခင် အိုင်းစတိုင်းကဆိုခဲ့သည်။ ‘ကောင်းသောစစ်နှင့် မကောင်းသောငြိမ်းချမ်းရေးဟူသည် မရှိ’ ဟူသော ဆိုရိုးစကားလည်းရှိသည်။ စာရေးဆရာကြည်မင်းက “စစ်ကြောင့် တိုးတက်မှုတချို့ရှိတာ မငြင်းလိုပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ စစ်ကြောင့်သာ တိုးတက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ မတိုးတက်ချင်ပါဘူး။ ငြိမ်းချမ်းရေးဟာ အချိန်မရွေးပြိုကွဲနိုင်တယ်။” ဟု စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့က ကျင်းပသော လူငယ်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးခေါင်းစဉ်ဖြင့် ပြုလုပ်သည့် ဟောပြောပွဲတွင် ထည့်သွင်းပြောဆိုသည်။
Author: lubo601 | 8:33 AM | 1 Comment |
Posted by yee toe on February 28, 2011 at 9:08pm
ဟိုတလောက ဂျပန်ငလျင်ကြီးနဲ့ ဆူနာမီ ဒီလှိုင်းကြီး ကြုံတွေ့ခိုက်မှာ ဂျပန်ရောက် မြန်မာတွေချင်း ရိုင်းပင်း ကူညီကြပုံများကို ကြားရပြီး ၀မ်းမြောက်ဂုဏ်ယူမိတဲ့အကြောင်း ရေးခဲ့တယ်။ မရှေးမနှောင်းမှာပဲ မလေးရှားပြန်
လူငယ်တစ်ယောက်ရေးတဲ့ ကိုယ်တွေ့အဖြစ်အပျက် စာမူတွေကို အမှာစာရေးဖို့ ဖတ်ရင်းနဲ့ မြန်မာတွေချင်း အရေးကြီးတော့ သွေးနီးကြပုံအကြောင်းတွေ တွေးပြီး ကြည်နူးပီတိ ဖြစ်ရတယ်။
by Voa Burmese on Monday, March 28, 2011 at 10:07pm
ဆြာသူရဿဝါ၏ မော်ဒန်နည်းကျ အိုင်တီအင်တာနက် ရှေ့ဖြစ်ပြောဟောစာတမ်းကြီး
ဟာသများ (Jokes) at Myanmar network.
ကျွန်ုပ်သည်ကား ငယ်စဉ်အခါကတည်းက ဗေဒင်ပညာကို ဝါသနာပါသည့် အားလျော်စွာ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်ရှိ နာမည်ကျော် ဝေဒပညာရှင်ကြီးများထံမှ လက္ခဏာ ခြေခဏာ ဟိုခဏာ ဒီခဏာ နိမိတ်ဟော ရှေ့ဖြစ် နောက်ဖြစ် မှစ၍ တားရော့ကဒ်ဟောနည်း၊ ခေါင်းပန်းလှန်ဟောနည်း၊ နံကြားထောက်ဟောနည်း အစရှိသည့် ဗေဒင်ဟောနည်း ပေါင်းစုံကို အွန်လိုင်းမှတဆင့် မေးလ်ပေးမေးလ်ယူ (Mail To Mail) စနစ်ဖြင့် သင်ကြားတတ်မြောက်ပြီး သကာလ ကျက်သရေမင်္ဂလာ သာမက စိန်ခြူးကြာညောင်အပေါင်းနှင့်ပါ ပြည့်စုံပြီး ထူးချွန်ထက်မြက် ဥာဏ်ရည်တက်သည့် အမျိုးကောင်းသားတစ်ဦး ဖြစ်သည်နှင့်အညီ မည်သူမှ စိတ်မကူးမိသေးသော အိုင်တီ၊ အင်တာနက် လောကအတွက် ရှေ့ဖြစ်ဟောစာတမ်းကြီးတစ်စောင်ကို ရေးသားဟောကြားပြုစု၍
နောင်ဖြစ်လာလတ္တံ့သော ရှေ့ဖြစ်ဇာတ်ကြောင်းများအား နောင်လာ နောက်သားတို့ ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ရန် အလို့ငှာ နာမည်ကျော် နည်းပညာဂျာနယ်တစ်စောင်ဖြစ်သော Net Guide ဂျာနယ် မှတဆင့် “ဆြာသူရဿဝါ၏ မော်ဒန်နည်းကျ အိုင်တီ အင်တာနက် ရှေ့ဖြစ်ပြောဟောစာတမ်းကြီး” အမည်ဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း ဒက်ဒက်ထိ ဟောပြောပေး လိုက်ရပေတော့လေသတည်း။
blog တွေ၊ wiki တွေ ကိုယ်ပိုင် ဒိုမိန်းတွေနဲ့ အုပ်စုတွေ၊ website တွေ
Author: lubo601 | 7:23 AM | No မှတ်ချက် |
Khin Win 10:05pm Mar 28
အခုတစ်လော blog တွေ၊ wiki တွေ အပြင် ကိုယ်ပိုင် ဒိုမိန်းတွေနဲ့ အုပ်စုတွေ၊ website တွေ တိုးတက် များပြားလာတာကို အချိန်တိုအတွင်းမှာ တွေ့ရှိလာရပါပြီ။ ဒါတွေကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် လူငယ်လူရွယ်တွေ အချိန်ကို အလဟဿ မကုန်ဆုံးအောင် အသုံးချတတ်လာကြပြီလို့ မှန်းဆလို့ ရပါတယ်။ ဒါဟာ ဖြစ်လည်း ဖြစ်သင့်ပါတယ်။
မိန်းခလေးတွေ အတွက် အထူးဆောင်းပါး
Author: lubo601 | 7:05 AM | No မှတ်ချက် |
ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာအလုပ်သမားအမျိုးအစား(၁)။ ။ တရားမ၀င်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသောမြန်မာအလုပ်သမားများအနေဖြင့်ယခု ၁၈-၃-၂၀၁၁ မှ ၂၅-၆-၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွင်းသတိထားပြီးနေထိုင်ကြပါရန်..ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ.၊ ထိုင်း လူဝင်မှု.ကြီးကြပ်ရေး အဖွဲ.များမှ ဖမ်းဆီးအရေးယူမည့်သတင်းများ ခိုင်လုံစွာရရှိထားပါတယ်...ဒါကြောင့် တရားမ၀င်အလုပ်သမားများအနေနဲ.အလုပ်ခွင်အတွင်းမှာ အထူးသတိပြုစေချင်ပါတယ်...အပြင်သွားခြင်း၊ဈေးသွားခြင်း၊အလှူ မင်္ဂလာ များသွားရောက်ခြင်းများသတိပြုရန်...မိမိနှင့်မသိသော ထိုင်းလူမျိုးများအားနီးစပ်စွာမနေထိုင်ရန်..သတိပေးအပ်ပါတယ်။
password တွေရဲ့အဓိပ္ပါယ်နဲ့ လုံခြုံအောင်ကာကွယ်နည်းများ
password တွေအကြောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တင်ပေးထားတဲ့နည်းပညာအချို့ကို ဧဒင်ကပိတ်ထားပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ gloaden eye spy
soft ware နဲ့ သုံးနည်းတွေ သူများစတစ်ထဲက data တွေကိုခိုးယူမယ် Program ရေးနည်းတွေပါတယ်။ ဘာမှမဟုပ်တဲ့ ရှေ့လူသုံးသွားတဲ့password ကြည်တဲ့ software တွေပါသေးတယ် ထားလိုက်ပါတော့နောက် password ခိုးယူမဲ့နည်းတွေမတင်တော့ဘူး..
ရန်ကုန်မြို့ ကမာရွတ်မြို့နယ်ရှိ နေအိမ်တစ်အိမ်မှ ပစ္စည်းများ အလိုအလျောက် မီးလောင်မှု ခုနစ်ကြိမ်ခန့် ဖြစ်ပွား
Author: lubo601 | 6:42 AM | No မှတ်ချက် |
by Myat Lay Ngon on Monday, March 28, 2011 at 10:54am
ရန်ကုန်မြို့၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ လှည်းတန်းဈေးအနီး ထန်းတပင်လမ်းရှိ နေအိမ်တစ်အိမ်အတွင်းမှ ပစ္စည်းများ အလိုအလျောက် မီးလောင်ကျွမ်းမှု ခုနစ်ကြိမ်ခန့် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ယင်းဖြစ်စဉ်များမှာ မတ်လ ၇ ရက်၊ ၈ ရက်၊ ၂၄ ရက်နှင့် ၂၆ ရက် နေ့များတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု သတင်းရရှိသည်။
by Lu Cifer on Monday, March 28, 2011 at 7:37pm
ကူညီရေးအထောက်အပံ့အတွက် စောင့်ဆိုင်းနေသူများ (reuters)
ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ NLD ရှမ်းပြည်နယ် တာဝန်ခံတဦးဖြစ်တဲ့ ဒေါ်ခင်မိုးမိုးက RFA ကို အခုလို ပြောပါတယ်။
Author: lubo601 | 5:42 AM | No မှတ်ချက် |
"လိင်၊ မုးယစ်ဆေး နဲ့ မော်စီတုန်း".
မော်စကိုတွင်တော့ စတာလင်ရဲ့ လူ သတ်မှုတွေကို နှစ်ပေါင်းများစွာ အချိန် ယူ တရားဝင် ဖော်ထုတ်ကြသည်။ ခရူးရှော့မှ ဂေါဘာချော့ဗ် အထိ သူ့နောက် ဆက်ခံတဲ့ ကွန်မြူနစ် ခေါင်းဆောင် အသီးသီးက စတာလင်ရဲ့ အမှားတွေကို
ပြန်ပြောကြသည်။ တရုတ် ကွန်မြူနစ်အစိုးရကတော့ ဒီလို နောင်တရ စကား ဘယ်တော့ မှ မပြော။ သမိုင်းဖြစ်ရပ်မှန်အပေါ် ရေငုံနှုတ်ပိတ် နေတတ်ပြီး ဝေဖန် ပြောဆိုမှုကိုလည်း သည်းမခံနိုင်သူများ ဖြစ်သည်။
မကြာခင်က တရုတ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စာအုပ်နှစ် ထွက်လာသည်။ Herrison E. Salisbury ရေးတဲ့ ‘မော်နဲ့ တိန့် ခေတ် တရုတ်ပြည်’ (The New Emperors: China in the Era of Mao and Deng) ဆိုတဲ့ စာအုပ်နဲ့ John Byron နဲ့ Robert Pack တို့ ပူးတွဲရေးတဲ့ ‘နဂါး ခြေသည်းလက်သည်းများ’ (The Claws of the Dragon) ဆိုတဲ့ စာအုပ်တို့ ဖြစ်သည်။
စာအုပ် နှစ်အုပ်ရဲ့ အသေးစိတ် ဖော်ပြချက်များအရ မော်စကိုမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပါတီတွင်း ပွင့်လင်းမြင်သာရေး ‘ဂလက်စ်နော့’ ပေါ်လစီမျိုး ပေကျင်းမှာ မလွှဲမရှောင်သာ ရောက်လာနေပြီဟု ဆိုသည်။ ထိုစာအုပ် နှစ်အုပ်က မော်စီတုန်းခေတ် ၀ရုန်း သုန်းကား အခြေအနေများ၊ ခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးအောက်မှာ ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်မှုများ၊ ပါတီနဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ အဂတိ လိုက်စားမှုများကို တွေ့ကြုံဖြတ်သန်းခဲ့သူများနဲ့ အသေးစိတ် မေးပြီး ရေးထားသည်။
စာရေးဆရာ Herrison E. Salisbury က နယူးယော့ခ်တိုင်း ပင်တိုင်ဆောင်းပါးရှင် ဖြစ်သလို၊ သမိုင်းဆရာ တစ်ဦးလည်း ဖြစ်သည်။ သူက မော် ကို ကွန်မြူနစ်ခေါင်းဆောင်ထက် ဧကရာဇ်ဘုရင် ဟု သုံးနှုန်းသည်။ မော် က လယ်ယာမြေ တော်လှန်ရေးကနေ အာဏာရလာသူ။ တောင်သူ တော်လှန်ရေးသမား တစ်ယောက်မှာ တရုတ်ပြည်ကို အုပ်ချုပ်ဖို့ ခေတ်မှီ တိုးတက်အောင် လုပ်ဖို့ ပြင်ဆင်ထားတာမရှိခဲ့ဟု ဆိုသည်။
"ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း နှင့် နိုင်ငံရေး ".
[By Myo Chit Myanma]
ခုတလော ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း စကပ်တိုတို ( အဲ မှားလို့ ) စကပ်မပါဘဲ နဲ့ အပေါ်က လိပ်ပြာလိုခြုံထားတဲ့ ဇာပုဝါပါး လိုလို ဘာလိုလို ဘာမှန်း မသိတဲ့ ဒီဇိုင်းနဲ့ သီချင်းဆိုနေတဲ့ ပုံတွေ အင်တာနက်မှာ ပြန့်နှန့်နေပါတယ်။
အရင်းအမြစ်ကိုကြည့်လိုက်တော့ ထင်ထားတဲ့အတိုင်းဘဲ အားကြိုးမာန်တက် ဖြန့်ဖြူးနေကြတာ နိုင်ငံရေးသမားလို့ အမည်ခံထားသူတွေ ကိုယ်တိုင်ဘဲ ဖြစ်နေပါတယ်။
နိုင်ငံရေး Site တစ်ခု နဲ့ ဒီလိုပုံတွေနဲ့ ဘယ်လို ပါတ်သက်ပါသလဲ ခင်ဗျာ...
ဝိုင်းစု ကလဲ ဝတ်တာ စားတာ မှာ ပုရိသ အာရုံဝင်စားမှု ရချင်တဲ့ စိတ်က လိုတာထက် နဲနဲ ပိုနေပါတယ်။
ကျွန်တော့် ညီမလေး အရင်းသာဆိုရင် ခုလောက်သာဆို ပက်ပက်စက်စက် အဆဲခံရလို့ စိတ်ကောက်နေလောက်ပါပြီ။
ကျွန်တော် သူနဲ့ ဒီ ကြားထဲ စကားပြောဖြစ်ခဲ့ရင် လဲ တကယ် လေးလေးနက်နက် ပြောလိုက်ပါ့မယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီစာရေးတာက ဝိုင်းစုအတွက် မဟုတ်ပါဘူး။
Author: lubo601 | 5:13 AM | No မှတ်ချက် |
လူငယ်တွေဘာကြောင့် စစ်တပ်ထဲဝင်တယ်ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက် ပြီး နည်းနည်းလောက် ပြောပြချင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ အခြေခံ စစ်ပညာသင်တန်း ပြီးတဲ့အခါ ကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ ပညာသည် အုပ်စု (အတိုကောက် “ပည” လို့ ခေါ်ပါတယ်) ဆိုင်ရာ အတန်း (၃) သင်တန်းမတက်ရခင် သက်ဆိုင်ရာတပ်တွေမှာ ခေတ္တတွဲ ဖက်နေရတယ်။ တနေ့မှာတော့ ကျနော်တို့အုပ်စုကို ဒုတပ်မှူး က ဟောခန်းတခုထဲမှာ ခေါ်ပြီးတွေ့တယ်။ အဲဒီ ဗိုလ်မှူးက ခပ် ပျော်ပျော်နေတတ်ပုံရတယ်။ ကျနော်တို့တတွေကို ညီအကိုလို ရင်းရင်းနှီးနှီးပဲ ခေါ်ပြောဆက်ဆံတယ်။
စစ်သည်တွေအားလုံး တစ်ယောက်စီထပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမိတ် ဆက်ရတယ်။ ပြီးတော့ သူကတယောက်ချင်းကို ဘာအားက စားဝါသနာပါသလဲ။ ဘာဖြစ်လို့ စစ်တပ်ထဲ ၀င်တာလဲလို့မေး တယ်။
အားကစားကိစ္စမှာတော့ ကိုယ်သန်ရာသန်ရာ ဖြေကြပေမယ့် စစ်တပ်ထဲဝင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို ပြောတဲ့နေ ရာမှာတော့ အားလုံး တထေရာတည်းလိုပဲ “ကိုယ့်ဘ၀တိုးတက်မှုကိုဖြစ်စေ လိမ့်မယ်ထင်လို့ဝင်တာ” လို့ ဖြေကြတယ်။
" ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ခြင်း ခိုင်မာစေမှု အချက်(၄)ချက် ".
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဘဝမှာ ဘာစိတ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ ဖြတ်လမ်းတွေမရှိပါ။ အခြေခံအနေနဲ့ လူသုံးမျိုးရှိတယ်။ မအောင်မြင်တဲ့သူ၊ ယာယီ အားဖြင့်အောင်မြင်တဲ့သူတွေနဲ့ အောင်မြင်မှု ရရှိလာပြီး ဆက်လက်အောင်မြင်မှုရရှိသူတွေ ဖြစ်တယ်၊ ခြားနားချက်ကတော့ အကျင့်စာရိတ္တ ဖြစ်တယ် Jon Huntsman ၊ ဥက္ကဋ္ဌ၊ Huntsman Chemical (၁) တော်တည့်ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်မှု လူတွေက ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရာ မှာ ပထမဦးဆုံး စဉ်းစားတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ Integrity ရဲ့အခြေခံကျတဲ့ ဆိုလိုချက်က ရိုး သားမှုဖြစ်ပေမယ့် အမှန်အားဖြင့် ဒါထက်မက ပိုမိုပါဝင်ပါတယ်။ ပေါင်းစည်းနိုင်စေမှု (Integratedness) ၊ ပြောတဲ့အတိုင်း လုပ်ဆောင်နိုင် မှု (Working The Talk) ၊ လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း တွေအတွင်းအပြင် နှစ်ခုစလုံးအလိုက်သင့်ဖြစ်စေ မှု (Congruence) ၊ တန်ဖိုးတွေယုံကြည်မှုတွေ နဲ့အညီ သတ္တိရှိစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်စေမှုတွေရဲ့ အပေါင်းအစည်းက Integrity ဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေငှားရမ်းပြီး လုပ်ငန်းတွေ ဆောင် ရွက်ရာမှာ ကျွန်တော်က အချက်သုံးချက်ကို ရှာပါတယ်။ ပထမတစ်ခုက တော်တည့်ဖြောင့် မတ်မှန်ကန်မှု (Integrity) ဖြစ်ပြီး ဒုတိယက ဥာဏ်ရည်စွမ်းအားထက်မြက်မှုနဲ့ တတိယအချက်က မြင့်မားတဲ့စွမ်းရည်အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် အကယ်၍ ပထမဦးဆုံးအချက်မရှိရင် တော့ အခြားနှစ်မျိုးက သင့်ကိုသတ်ပါလိမ့် မယ်။ Warren Buffett ၊ စီအီးအို၊ Berkshire Hathaway ကို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရာ မှာ အများစုက Honesty လို့ခေါ်တဲ့ ရိုးသား မှုလို့ပဲ သိထားကြပေမယ့် ရိုးသားမှုမှာ အမှန် ကို ပြောဆိုခြင်းသာမက မှန်ကန်တဲ့လုပ်ဆောင် မှုပါ ကျန်ရစ်စေမှာဖြစ်တယ်။
ဒိလောက်ခေတ်မှီနေတဲ့ အိုင်တီခေတ်ကြီးမှာ ရှေးဟောင်းပညာကို စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့ နည်းနည်းတော့ ကြောင်တယ် ထင်မလားမသိဘူး။ ဒါပေမယ့် ပညာရပ်တိုင်းမှာ တန်ဘိုးဆိုတာရှိသလို၊ မြှုပ်ကွက်တွေလဲရှိတယ်..။ ကိုယ်အသုံးမပြုပေမယ့် အသုံးပြုတတ်တွေကြောင့် အသုံးပြုသူလဲ ခံစားခွင့်ရှိသလို တစ်ပါးသူအတွက်လဲ အကျိုးရှိခဲ့ တယ်ဆိုတာ သိခဲ့ ရတယ်။
ကျနော် နေထိုင်ခဲ့ တဲ့ပါတ်ဝန်းကျင်က တောနယ်လေးဆိုပေမယ့် ကျနော့်အတွက်တော့ လေ့လာစရာ ဆည်းပူးစရာတွေချည်းပါဘဲ..။ အလွှာစုံလူစုံပါ။
မြန်မာနိုင်ငံကို တရားမ၀င် အုပ်ချုပ်နေတဲ့ အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ မူကြမ်း-၂၀၀၈ ထဲက ပညာရေးကဏ္ဍနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မူကြမ်းလေးချက်ကို ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်တွေမှာ ပြောပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ အဲဒီအချက်လေးချက်ထဲက အချက်သုံးချက်နဲ့ ပတ်သက် လို့လည်း ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဒီတပတ်မှာတော့ အချက်လေးချက်ထဲက နောက်ဆုံး တချက်ဖြစ်တဲ့ "ဘက်စုံအတွေးအခေါ်အယူအဆမှန်ကန်၍ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ပြီး နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေးအတွက် အကျိုးပြုမည့် ခေတ်မီပညာရေးစနစ် ဖော်ဆောင် ရမည်"... ဆိုတဲ့ အချက်ကို ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်။
Author: lubo601 | 10:51 PM | 1 Comment |
အိမ်ထောင်ဖက်အဖြစ် ရွေးချယ်သင့်တဲ့ ယောက်ကျားတွေထဲမှာ အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ယောက်ကျားအမျိုးအစားလည်း တစ်ပါး အပါအ၀င်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လင်ဆိုး ၊ လင်ဖျင်း ၊ လင်ပျင်းစတဲ့ မပေါင်းထိုက်တဲ့ ယောက်ကျားတွေကို တတ်နိုင်သမျှ ရှောင်ရှားနိုင်ပြီး ပျော်ရွှင်သာယာ တဲ့ အိမ်ထောင်ရေးတစ်ခုကို ဖန်တီးနိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်။
ရေမွှေးဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ခေတ်အစားဆုံး ဖက်ရှင်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ရေမွှေးမနှစ်သက်သူ လူနည်းစုသာရှိခဲ့ပြီး အများစုကတော့ အမွှေးရနံ့ကိုကြိုက်သူတွေချည်းပါပဲ။ ရေမွှေးမသုံးတဲ့ အမျိုးသမီးမှာ အနာဂတ်ဆိုတာမရှိဘူးလို့ ကမ္ဘာကျော်ရေမွှေးကုမ္ပဏီက ရေမွှေး ပညာရှင်တစ်ဦးကပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဟိုးရှေးယခင် ဘုရင်တွေခေတ်ကတည်းက ... အမွှေးရနံ့တွေက ကမ္ဘာနဲ့တစ်ဝှမ်း နည်းပေါင်းစုံ နဲ့ ဖော်စပ်သုံးလာကြပါတယ်။ အဲဒီတုန်းကတော့ အမျိုးသားသုံး၊ အမျိုးသမီးသုံးရယ်လို့ မခွဲထားပါဘူး။ ဒီနောက်ပိုင်းမှာ အမျိုးသားသုံး သီးသန့်၊ အမျိုးသမီးသုံးရယ်လို့ မခွဲထားပါဘူး။ ဒီနောက်ပိုင်းမှာ အမျိုးသားသုံးသီးသန့်၊ အမျိုးသမီးသုံးသီးသန့်ခွဲပြီး ရနံ့တွေဖော် ထုတ်လာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုနောက်ဆုံးမှာ အမျိုးသားရော၊ အမျိုးသမီးရော အတူသုံးလို့ရတဲ့ ရေမွှေးထွက်လာပါတယ်။ သင့်ချစ်သူ နဲ့ ရေမွှေးတစ်ပုလင်း အတူသုံးပြီး ရနံ့ဆင်တူသင်းပျံ့နေရတာ နှစ်ကိုယ့်တစ်စိတ်ဆိုတဲ့အသိနဲ့ ကြည်နူးရမှာသေချာတယ်ဆိုတဲ့ ကြော်ငြာအမိုက်စားနဲ့ပေါ့။
ဟားဘတ် စီးပွားရေးကျောင်းတော်မှာ မသင်ခဲ့ရလေသမျှ ဆိုသော စာအုပ် တစ်အုပ်ကို ဖတ်ခဲ့ရဖူးပါသည်။ ဟားဘတ် စီးပွားရေးကျောင်းတော်သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အတော်ဆုံး ခေါင်းဆောင်များ၊ မန်နေဂျာများနှင့် စီးပွားရေးသမားများကို မွေးထုတ်ပေးရာ ကျောင်းတော်ကြီး တစ်ကျောင်းအဖြစ်လည်း ကြားဖူးထားပါသည်။ သို့တိုင် ဟားဘတ် စီးပွားရေးကျောင်းတော်သားများ ကိုယ်တိုင် မသင်အံခဲ့ရသော အရာများလည်း ရှိသေးပါလားဟု ထိုစဉ်က တွေးမိပါသည်။ ယခု ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကို ထပ်ဖတ်ရပြန်ပါပြီ။ ထိုဆောင်းပါး၏ ခေါင်းစဉ်ကတော့ “သင့်ဘဝကို ဘယ်လိုတိုင်းတာမည်လဲ (How Will You Measure Your Life)” ဟု ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံရေးသမားကောင်း တစ်ယောက်ဖြစ်ရန် ပညတ်တော် (၁၀) ပါး (Ten Rules For BeingaGood Politician)
နေရာယူတတ်တိုင်း အာဏာရသည်မဟုတ်။ တစ်ဦးချင်းအနေနဲ့ သင့်မှာ မဖြစ်စလောက် အာဏာလေးပဲရှိတယ်ဆိုတာ နားလည်ထားပါ၊
အာဏာဆိုတာ စုပေါင်းလုပ်ရပ်ကနေ ထွက်ပေါ်လာခြင်းသာ ဖြစ်တယ်။
ပြည်သူတွေနှင့် မကင်းမကွာနေပါ။ နောင်အခါသူတို့ရဲ့ ထောက်ခံမူကို သင်လိုအပ်လာလိမ့်မယ်။
အခြားသူတွေရဲ့ သဘောတူညီချက်ကို ငါ ဘယ်လို ရနိုင်မလဲ။
လူတိုင်းလူတိုင်းအနေနဲ့ တစ်ခုခုတော့ အကျိုးအမြတ်ရရှီသွားတဲ့အနေအထားကိုဖန်တီးပါ။
"ရိုးရာဓလေ့ အသိပညာ နှင့် သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် ".
Author: lubo601 | 4:26 AM | No မှတ်ချက် |
ရိုးရာဓလေ့ အသိပညာသည် လူသားတိုင်းတွင် စွဲမြဲခိုင်မာစွာ လိုက်နာကျင့်သုံးနေသော ယုံကြည်မှု၊ လုပ်ကိုင်မှုတစ်မျိုးပင် ဖြစ်ပါသည်။ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် ကျန်းမာရေး အစရှိသည့် နယ်ပယ်အသီးသီးတို့တွင် ဘိုးဘွားဘီဘင်မှစ၍ သားစဉ်မြေးဆက် အလေးထား လိုက်နာကျင့်သုံးခဲ့ကြသော ထုံးတမ်းစဉ်လာများ အဖြစ်လည်း တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ နေ့စဉ် ကြုံတွေ့နေကြသော လူမှုဘဝနယ်ပယ်တွင် အလုပ်သစ်တစ်ခုကိုဖြစ်စေ မလုပ်ဖြစ်သည်မှာ ကြာပြီဖြစ်သော အလုပ်တစ်ခုကိုဖြစ်စေ ရုတ်တရက် လုပ်ကိုင်ရန် ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါက စတင်လုပ်ကိုင်ရန် ချီတုံချတုံ ဖြစ်နေတတ်ပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် အနီးအနားရှိ အတွေ့အကြုံ ရင့်ကျက်မှုရှိသူတစ်ဦးဦးက တို့ရဲ့ဓလေ့ထုံးစံအရ ဆိုရင်တော့ ဒီလိုလုပ်သင့်တယ်ဟု အကြံပေး တိုက်တွန်းလိုက်မည်ဆိုပါက ထိုအလုပ်ကို အလွယ်တကူပင် လုပ်ကိုင်ဖြစ်ကာ အောင်မြင်ပြီးမြောက် သွားလေ့ရှိသည်ဟု သိရပါသည်။ မြန်မာမှုနယ်ပယ်တွင် “ရှေးထုံးလည်း မပယ်နှင့် ဈေးသုံးလည်း မလွယ်နှင့်” ဟူသော စကားပုံသည် ရှေးထုံးစဉ်လာများကို အလေးထားရန် လိုအပ်ကြောင်း သတိပေး ဆုံးမစကား တစ်ခုအဖြစ် ထင်ရှားစွာ တွေ့ရှိရပါသည်။ ဤနေရာတွင် မိသားစုတစ်စုတွင် အတွေ့အကြုံများခြင်း ရိုးရာဓလေ့ အသိပညာကို သိနားလည်ခြင်းသည် ၄င်းမိသားစုအား ဘေးအန္တရာယ်မှ အကာအကွယ် ပေးနိုင်ခြင်းဟူသော အကျိုးကျေးဇူးများကို ရရှိစေနိုင်ပါသည်။
“ အတိုက်အခံ ” ဟူသော ဝေါဟာရကို မည်သူသည် မည်သည့်အချိန်က မည်သို့သော အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ဖြင့် စတင်သုံးစွဲခဲ့သည်ဆိုတာကိုတော့ မသိပါ၊
ကြားဖူး ဖတ်ဖူးနေတာတော့ ကြာလှပါပြီ၊
နိုင်ငံရေး စီးပွားရေး လူမှုရေး နယ်ပယ်အသီးသီးမှာ သုံးစွဲနေကြပါသည်၊
ယခု တင်ပြလိုသည်မှာ နိုင်ငံရေးအတိုက်အခံ ကိစ္စဖြစ်ပါသည်၊
ပြည်တွင်းပြည်ပ အတိုက်အခံများ ဆိုသည်ကိုလည်း ရေဒီယိုမှ နေ့စဉ်လိုလို ကြားရပါသည်၊
ဒါကြောင့် အာဏာရအစိုးရ၏ ပြုမူမှုများကို မတရားပါဟု ယူဆလျှင် ဖီဆန်ခြင်း၊ အံတုခြင်း၊ ဆန့်ကျင်ခြင်းတို့ကို နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ဆောင်ရွက်နေကြသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းများကို အတိုက်အခံဟု ခေါ်ပါသည်လို့ ရိုးသားရှင်းလင်းစွာ မှတ်ယူမိပါသည်။
"သခင်အောင်ဆန်း က "လူညံ့စိတ်ဖျောက်ပြီး၊ နိုင်ငံရေးကို လိုက်စားလိုက်စမ်းပါ" တဲ့".
Author: lubo601 | 3:35 AM | No မှတ်ချက် |
[By Lovely Man]
သခင်အောင်ဆန်း အတွေး၊ သခင်အောင်ဆန်း အရေး လူတွေကို ပြုပြင်လို့ရ၏။ ပြုပြင်လို၏။ တိုးတက်လို၏။ ဤအချက်မှာ ထင်ရှားနေပေပြီ။ စင်စစ် နိုင်ငံရေးမှာ ထိုပြုပြင်တိုးတက်လိုသည့် ပင်မတရားကြီး တစ်ရပ်ပင်ဖြစ်၏။ ထိုတရားကား..လောကီ နိဗ္ဗာန် ကို နောက်ဆုံး ရည်မှန်းပေ၏။
ကမ္ဘာလောကဓါတ်ကို သူ့သဘာဝ သူ့မူ သူ့ကိန်းအလျှောက် သိလျှင်မူ မည်သူမျှ အာဏာရှင် မင်းလောင်းတို့ကို မျှော်နေမည်မဟုတ်။ ခေါင်းဆောင်ကောင်းကိုလည်း စောင့်စားနေမည် မဟုတ်။ မိမိဝတ္တရား အင်အားကိုသိလျှင် သိသည့်အလျှောက် လူတိုင်း ကြိုးစားကြမည်။ နိုင်ငံရေးသည် လူတိုင်းနှင့်ဆိုင်သည်။ လူတိုင်းလုပ်မှ ဖြစ်မည်။ မင်းလောင်းမျှော်နေစရာ မဟုတ်၊ ဘယ်နေရာကမှ မင်းလောင်းပေါ်လာမည်မဟုတ်။
Author: lubo601 | 3:20 AM | No မှတ်ချက် |
မတူညီမှုများ ဆိုတာကို စဉ်းစားမိတယ်။
လောကကြီးမှာ မတူညီမှုတွေက အများကြီးပါပဲ။
တူညီတယ်ဆိုတာ အတော်လေးကို ရှားပါးတယ်လို့ ထင်တယ်။ ရှိရော ရှိလုို့လား။
ထားပါတော့ လူသားတွေရဲ့  မတူညီမှုတွေကို စဉ်းစားကြည့်ရအောင်။
ကျနော့်ရဲ့ ထာဝရ သူရဲကောင်း အဖေ
Author: lubo601 | 3:14 AM | No မှတ်ချက် |
အမေ့ဝမ်းက လွတ်မြောက်လို့ ကျနော် လူ့ဘ၀ကို စတင်ရောက်တဲ့ အချိန် အတိတ်က ၀ဋ်ကြွေးတွေကြောင့် မွေးရာပါ ရောဂါများနဲ့ ဒုက္ခတွေ ခံစားနေရတဲ့ အချိန်မှာ အဖေဘယ်လို ခံစားရသလည်း ဆိုတာ အမေ့ပြန်ပြောပြလို့ သိရတဲ့ အချိန် အဖေ့မေတ္တာနဲ့ အဖေ့ကျေးဇူးကို ဆပ်နိူင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် မလွန်ဆန်နိူင်တဲ့ သေခြင်းတရားက အဖေနဲ့ ကျနော့်ကို ခွဲသွားလိုက်ကြပြီ ။ ဘယ်ဆရာဝန်က မှ လက်မခံတော့တဲ့ ကျနော့်ကို အဖေပုခုံးပေါ်မှာ ထမ်းပြီး ရှိသမျှ စည်းစိမ် ကုန်ချင်ကုန်စမ်းကွာ ငါ့သားအတွက် ဆို အရာရာ တိုင်းပေးဆပ်ရဲတယ် ဆိုတဲ့ စကားကို လက်ကိုင်ထားပြီး ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအ၀ိုင်းက မိတ်ဆွေများနဲ့ တတ်ကျွမ်းနားလည်ပါတယ်တဲ့ ဆရာဝန်တွေကို စကားကို ဥပက္ခာ ပြုထားတဲ့အဖေ့ရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ကျနော်ကို ဘယ်လောက် တန်ဖိုးထားခဲ့သလည်း ဆိုတာ သားသိရတဲ့ အချိန်မှာ အရမ်းကို ခံစားရပါတယ် အဖေရယ် ။
"တော်လှန်ရေးနေ့သမိုင်းမှန် မျိုးဆက်သစ်စစ်အရာရှိတွေ အကြား အသိအမြင်နည်း".
Author: lubo601 | 3:11 AM | No မှတ်ချက် |
[By Voa Burmese]
မြန်မာမြေပေါ်က ဖက်ဆစ်စနစ်ကို တပ်မတော်၊ ပြည်သူ၊ နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေ တစုတစည်းတည်း တော်လှန်ခဲ့တဲ့ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးနေ့ အခုနောက်ပိုင်းအခေါ် တပ်မတော်နေ့ရဲ့ သမိုင်းနောက်ခံကို လက်ရှိတပ်တွင်း အရာရှိအရာခံတွေအကြားမှာ သိရှိနားလည်သူ အလွန်နည်းသွားတယ်လို့ တပ်မတော် အရာရှိဟောင်းတဦးက ပြောပါတယ်။ ဒီနေ့ကျရောက်တဲ့ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးနေ့ဟာ တပ်မတော်အတွက် ဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ် ဆိုတာနဲ့ လက်ရှိတပ်တွင်းမှာရော ဒါကို ဘောပေါက်နားလည်သူ ရှိသေးရဲ့လား ဆိုတာတွေကိုတော့ တပ်မတော် အရာရှိဟောင်းတွေနဲ့ ကိုသားညွန့်ဦးက ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။
Author: lubo601 | 2:57 AM | No မှတ်ချက် |
[By Kyawnaing Latt] Mar 24, 2011 at 8:47 AM
ရာသီလာခါနီး ဖြစ်တတ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ စိတ်အခြေအနေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သိချင်ပါတယ်။ လစဉ်လတိုင်း ရာသီလာခါနီး ရက်တွေတိုင်းမှာ အချို့သော မိန်းကလေးတွေရဲ့ စိတ်တွေက အရမ်းကို ထိခိုက်ခံစားလွယ်ပြီး၊ ဘာမှမဟုတ်တဲ့ အကြောင်းအရာလေး ပေါ်မှာတောင် အရမ်း Sensitive ဖြစ်လွန်းတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကျွန်မကိုယ်တိုင်ကတော့ အဲလို ရက်မျိုး နီးပြီဆိုရင် စိတ်ခံစားမှု အရမ်း Sensitive ဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းအရာ သေးသေးလေးပေါ်မှာလည်း ဒေါသအကြီးကြီး ထွက်နေတတ်ပါတယ်။ ဘာမှ မဟုတ်တာလေးနဲ့လည်း ရင်ထဲမှာ ဝမ်းနည်း ထိခိုက်လွယ်ပါတယ်။
ဘလော့ဂ်ဂါ မိတ်ဆွေတဦးမှ သူခံစားရတာလေး သက်သာအောင် ဘယ်လိုနေရမလဲ မေးလာ တာနဲ့ အားလုံးလည်း ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဗဟုသုတလေး ရရှိစေရန် ဒီပို့စ်လေးကို ရေး သားလိုက်ပါတယ်။
ထိပ်ကပ်(ခပ်)နာ ဆိုတာ လူ့ဦးခေါင်းခွံရိုး အတွင်းမှာရှိနေတဲ့ လေအိတ်ငယ် လေးများ ယောင် ယမ်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
လူ့ရဲ့ဦးခေါင်းခွံရိုး အတွင်း မျက်ခုံးရိုးတ၀ိုက်၊ ပါးနှင့် မေးရိုးတ၀ိုက် နှင့် နှာခေါင်းရိုးတ၀ိုက်တွင် အခေါင်းပေါက် ပါသော လေအိတ်ငယ်လေးတွေ ပါရှိပါတယ်။ ယင်း လေအိတ်ငယ် လေးများကို ဆေးပညာ အခေါ်အရ sinus ဟုခေါ်ပါတယ်။
Author: lubo601 | 12:55 AM | 1 Comment |
by Thet Wai on Sunday, March 27, 2011 at 2:18pm
ကျွန်မ မောင့်ကို စတွေ့သော အချိန်မှာ ကြည်နူးလွမ်းမောဖွယ်ရာ မိုးစက် မိုးမှုန်များ ဖြိုးဖြိုးဖျောက်ဖျောက် ကျနေသော အချိန်လည်းမဟုတ်၊ နှင်းပွင့်ဖြူဖြူတွေ တဖွဲဖွဲ ကျနေသော အချိန်လည်း မဟုတ်ပါ။ ခြောက်သွေ့ပြီး ပူလောင်အိုက်စပ်လှသော နွေနေ့လည်ခင်း တခုမှာ… ပြီးတော့ လူနှစ်ယောက် ရှောင်လို့ လွတ်ရုံသာ ရှိသော ကန်ထရိုက်တိုက်ခန်းတခု၏ ခပ်ကျဉ်းကျဉ်း မှောင်ပြပြ လှေခါးထစ်များတွင် ဖြစ်သည်။ ကျွန်မက မောင်ရှိရာ ကျူရှင်ကို ကျောင်းသူအသစ်အဖြစ် အလာ၊ မောင်က ဆရာမ အလစ်ကို ချောင်းပြီး ကျူရှင်မှ အပြေး…။ ကျွန်မ မောင့်ကို စတွေ့လိုက်သော အချိန်မှာ မောင့်မျက်နှာပေါ်က နေကာမျက်မှန်ကြောင့် မောင့်မျက်လုံးတွေကို မမြင်ရသော်လည်း နှုတ်ခမ်းက လက်ကနဲ တောက်ပသွားသော မောင့်အပြုံးကို ကျွန်မ မြင်လိုက်ရသည်။ နွေအပူနှင့် စာမေးပွဲ အပူများအပေါ် ထပ်ဆင့်ဖိစီးသော အပူတခု ရင်ထဲကို ရောက်လာသည်ဟု ကျွန်မ သိလိုက်သည်။ ပြီးတော့ ထိုအရာသည် ကျွန်မ မျှော်လင့်မထားခဲ့သော အချစ် ဖြစ်နေလေသည်။ ထိုနေ့က ကျူရှင်ကို မောင်ပြန်လာလိမ့်နိုး မျှော်လင့်ရင်း မျှော်လင့်ရင်း ဆရာမ စာသင်နေတာကို အာရုံစိုက်မရ ဖြစ်နေခဲ့သည်။ သို့သော် မောင် ပြန်မလာပါ။ အမှန်ဆိုလျှင် ကျောင်းပြေးတတ်၊ ကျူရှင်ပြေးတတ်သောသူများကို ကျွန်မ မုန်းပါသည်။ သို့သော် အချစ်သည် မျက်နှာလိုက်တတ်သည်လေ။
ဖောင်ဒေးရှင်းတည်ထောင်လိုသော ပရဟိတသမားများ အလေးထားစဉ်းစားရမည့်အချက်များ
Author: lubo601 | 12:35 AM | No မှတ်ချက် |
ဘီလ်ဂိတ်၊ ဝါရင်ဘက်ဖက် ကဲ့သို့ ကြွယ်ဝသော ပရဟိတသမားများသည် ၄င်းတို့ ငွေကြေးထည့်ဝင်သယ်ပိုးပေးခဲ့သော ပရဟိတလုပ်ငန်းများမှ မလိုလားအပ်သောရလဒ်များ ပေါ်ပေါက်လာမည်ကို နှစ်သက်ကြမည် မဟုတ်ချေ။သို့သော် လူမှုကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေသော အဖွဲ့အစည်းများအတွက် ချက်လက်မှတ်များရေးပေးရုံနှင့် ပရဟိတသမားများ မျှော်လင့်နေသည့် ကြီးကျယ်သောအပြောင်းအလဲများ ပေါ်ပေါက်လာမည်မဟုတ်ချေ။
အရွယ် မရောက်တရောက် လူငယ်ပြဿနာ
Author: lubo601 | 7:30 AM | No မှတ်ချက် |
Wednesday, 23 March 2011 13:15
“လူငယ့်ပြဿနာ လူကြီး မရှင်းသာ” ဆိုပြီး ဆရာကြီး ဒေါက်တာသန်းထွန်း ရေးခဲ့ဖူးတဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် (အိန္ဒိယ ချစ်ကြည်ရေးခရီး - ဆောင်းပါးများ စာအုပ် ပါ) ကို သတိရတယ်။ ဆရာကြီးက ပညာရှင်လည်း ပညာရှင်၊ နိုင်ငံတကာခရီးတွေလည်း သွားခဲ့လေသူ ဆိုတော့ အကြောင်းအရာတစ်ခုကို ချက်ကျ လက်ကျနဲ့ စုံစုံလင်လင် ရေးသားသွားနိုင်တယ်။
ကျွန်တော်ကလည်း တောင်ဖတ်မြောက်ဖတ် ဖတ်တဲ့သူ ဆိုတော့ ကြားရ၊ မှတ်ရ၊ အသိအမြင် တိုးတယ်လို့ ပြောလို့ရတယ်။ အဓိကက လူငယ်ပြဿနာဆိုတာ ဘာလဲလို့ သေချာ စေ့ငုလေ့လာ၊ စစ်တမ်းထုတ်နိုင်ဖို့ ဆိုတာ လွယ်တဲ့ ကိစ္စမဟုတ်ဘူး ထင်တယ်။ ဆိုလိုတာက ပညာရပ်ဆိုင်ရာအတွင်းက ပညာတတ် လူတစ်စုအနေနဲ့ သုတေသန လုပ်မယ်ဆိုရင်တောင် အလုံးစုံကို ခြုံငုံမိဖို့၊ ယေဘုယျကျတဲ့ အဖြေတစ်ခု ရဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူး ထင်တယ်။ ကျွန်တော့်အတွက်ဆို ပိုပြီးတော့တောင် မအပ်စပ်လှဘူး မဟုတ်လား။
"ထွက်ရပ်ပေါက် ပုဂ္ဂိုလ် ".
Author: lubo601 | 7:22 AM | 1 Comment |
Author: lubo601 | 7:09 AM | 1 Comment |
[By Dhamma Ganga]
'Men always remember ladies because of romance only''“အမျိုးသားတွေဟာ အမျိုးသမီးတွေကို အချစ်တစ်ခုတည်းကြောင့်သာ သတိရတတ်ကြသတဲ့ဘုရား။ ”
မာဘိုရိုစီကရက်တစ်လိပ်ကို မီးညှိဆက်ကပ်ရင်း တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတစ်ယောက်က ရယ်ကျဲကျဲဖြင့် လျှောက်ထားဖူးလေသော စကားတစ်ခွန်းဖြစ်ပါသည် ။ အော် သူသည်လည်း ဆယ်ကျော်သက်ရွယ် ရှင်ငယ်ဘ၀မှ အစပြုကာ စာတိုပေစနှင့် ကဗျာဗေဒကို ဖတ်မှတ်၊ စီးကရက်ကို လက်ကြားညှပ်၊ အမြင်ကပ်ဖွယ် ကောင်းခဲ့ဖူးလေသည်ကော။ ပြန်တွေးကြည့်တော့ ''ဘယ်လိုမှ ကြည်ညိုဖွယ်ရာမမြင်၊ အသွင်ရိုင်းလှသည် '' ဟု ဆရာသခင်အဆူဆူတို့က အယူအမျိုးမျိုးပြ၊ ဆုံးမကြသော်လည်း
“အမေဘယ်လို ချော့သိပ်သိပ်၊ ငါအိပ်မှ ပျော်မည် ” ဂိုက်ဖမ်းကာ သင်္ကန်းတလွှားလွှား၊ဆေးလိပ်တကားကားဖြင့် လမ်းသလားခဲ့သူကြီးပေပ။
ခေတ်ပေါ် မြန်မာအီဒီယမ် စကားလုံးများ
by Chan Myae on Saturday, March 26, 2011 at 12:44pm
ကျွေးလိုက်ရ= ချလိ်ုက်ရ။ ဆော်လိုက်ရ။ ထိုးလိုက်ရ။
ကက= (အနက်မပြန်လိုပါ) မကောင်းသောမိန်းမ။ မိန်းခလေးများ ကိုယ့်ကို ထိုသို့အခှေါခံရလျှင် ချစ်စနိုးနှင့် ညည ဟုခေါ်သလိုမျိုးဟု မထင်လိုက်ပါနှင့်။ ပါးလှည့်တီးထည့်လိုက်ပါ ။ (စကားချပ်)
သစ်ပင်စိုက်ကြ တိုင်းပြည်ရဲ့အလှ .
[By Network For Green Myanmar]
ချစ်စွာသော စာဖတ်သူများ ခင်မျာ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ ကြပါစေ။ ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်က နာဂစ် အမည်တွင်တဲ့ လေမုန်းတိုင်းကြီး တစ်ခုဟာ ဧရာဝတီတိုင်း မြစ်ဝကျွန်းပေါ် အောက်ပိုင်းဒေသနဲ့ ရန်ကုန်တိုင်း တွံတေးကော့မှူး ကွမ်းခြံကုန်း စတဲ့ မြို့နယ် အချို့ကို တိုက်ခတ် ဖျက်ဆီးသွားတဲ့ အတွက် လူပေါင်း သောင်းနဲ့ချီပြီး သေကြ ပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။ လူနေအိမ်ခြေများ အပြင် ကျွဲနွား တိရစ္ဆာန်တွေလည်း ထောင်ပေါင်းများစွာ သေဆုံး ပျက်စီးခဲ့ကြရပါတယ်။ အေးဗျာ ဒီလို မုန်တိုင်းမျိုးဟာ ဒီဘက်ဒေသကို ယခုလို ဝေ့ဝဲပြီး ဝင်ရောက် မွှေနှောက် တိုက်ခတ်ခြင်းမျိုးဟာ သဘာဝရာသီဥတု ဖောက်ပြန်ပြောင်းလွဲ လာတဲ့ လက္ခဏာ တစ်ရပ်ပါပဲ။ ဖြစ်ရိုးထုံးစံမရှိခဲ့တဲ့ အစဉ်အလာကို ဖောက်ဖျက်လာတာ။ ဒီနှစ်နဲ့မနှစ်က ဆိုရင်လည်း မြန်မာပြည်၊ အိန္ဒိယနဲ့ ဘင်္ဂလားဒက်ရ်ှစတဲ့နိုင်ငံတွေမှာ မေလအတွင်း ရာသီဥတုဟာ ယခင့်ယခင်နှစ် ကာလများထက် သိသိသာသာပူပြင်းခဲ့တာအားလုံးအသိပါပဲ။ ဆိုးလိုက်တာ။ အညာဒေသမှာဆိုရင် ပူလောင်လွန်းလှတဲ့ နွေရာသီဒဏ်ကြောင့် အသက်အရွယ်ကြီးရင့်သူ များတော်ပဲပြင်းထန်စွာခံစားခဲ့ကြရပါတယ်။ အချို့လည်း ရေချိုးမှားလို့ ရေဓာတ်ခမ်းလို့ မူလရှိတဲ့ရောဂါအခံနဲ့ သေဆုံးကွယ်လွန် သွားကြရပါတယ်။ ပူပြင်းတဲ့ဒဏ်ကို လူတွေအများ ကြီးခံခဲ့ကြရပါပြီ။
by Breathing Linn on Friday, March 25, 2011 at 11:10pm
ကျွန်မရေးခဲ့ဖူးတဲ့ စာတော့ မဟုတ်ပါဘူးရှင်... အရှင်လတ်လတ်နဲ့ ပျောက်ဆုံးတော်မူနေတဲ့ ကျွန်မဘော်ဒါကြီး ကိုရင်နော်ရဲ့ စာလေးပါ..။ ဘယ်နေ့မှာ ဘာများဖြစ်လေမလဲ ရယ်လို့ ထိတ်လန့်မှုများစွာနဲ့ ရှင်သန်နေရတဲ့ ဟောဒီကမ္ဘာကြီးထဲမှာ နေ့ဒဓူဝဆိုသလို တုန်လှုပ်ဖွယ် သတင်းများစွာ ကြားရ ဖတ်ရ မြင်တွေ့နေရတာ အမှန်ပါ..။ ဒီ လိုမျိုး နေ့တွေတိုင်းကို ကြိုးစား ဖြတ်ကျော်နေရင်း ဒီ post လေးကို သတိရသွားလို့ ကျွန်မတို့ ဘလော့ကနေ ဆွဲထုတ်ယူလာ မျှဝေခြင်းပါ။ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် post ကိုဖတ်အပြီး နည်းနည်းလေး ဖြစ်ဖြစ်တော့ ပြုံးစိစိ လုပ်နိုင်ကြပါစေ...ပေါ့နော်။ :P (ကျွန်မ သူငယ်ချင်း အပေအတူး ဒင်းကြီးအကြောင်း ကောင်းကောင်း သိနေပြီးသား အကိုတွေ အမတွေ မောင်ငယ် ညီမငယ်တွေ အများကြီးကိုတော့ ထွေထွေထူးထူး နံမည်ထည့် ရေးမထား တော့ပါဘူးနော်..)
လူဖြစ်ရခြင်း၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်သည် ၀မ်းစာရှာဖို့မဟုတ်၊ အိပ်ဖို့မဟုတ်၊ စားဖို့မဟုတ်၊ ကာမဂုဏ်ခံစားဖို့မဟုတ် ၊ ကုသိုလ်ပြုဖို့အတွက်သာ ဖြစ်သည်။ တိရစ္ဆာန်တွင် ၀မ်းစာရှာဖို့၊ အိပ်ဖို့၊ စားဖို့ နှင့် ကာမဂုဏ်ခံစားဖို့ အချက်လေးချက်ရှိ၏ ထို့အတူလူတွင်လည်း ထိုအချက်လေးချက်ရှိ၏။ ထိုအချက်လေးချက်တည်းသာရှိနေလျှင် လူသည် တိရစ္ဆာန်နှင့် ဘာမှ မထူး အတူတူသာဖြစ်၏။
လူသားသည် ကုသိုလ် (ပရဟိတ) အလုပ်ကိုလုပ်တတ်သည်။ တိရစ္ဆာန်ကားမလုပ်တတ်။ ထိုကုသိုလ် (ပရဟိတ) အလုပ်ကြောင့်သာလျှင် လူသားသည် တိရစ္ဆာန်ထက် သာလွန် မြင့်မြတ်သွားခြင်းဖြစ်၏။ ၃၁ ဘုံတွင် လူ့ဘုံတစ်ဘုံတွင်သာ ကုသိုလ်လုပ်လို့ရသလော၊ မေးခဲ့ငြားအံ့။ မရနိုင်ဟုသာ ဖြေရပါလိမ့်မည်။ မရနိုင်ဟူသည် လူ့ဘုံကဲ့သို့ တင်းပြည့်ကျည်ပြည့် မရနိုင်ဟု ဆိုလိုခြင်းဖြစ်၏။
Author: lubo601 | 10:39 AM | No မှတ်ချက် |
[by Mizzima မဇ္ဈိမ] ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ) ။ ။
မြန်မာနိုင်ငံ၌ ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ သတင်းများကို အချိန်မီ တင်ပြပေးနေသည့် မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒပညာရှင် ဦးထွန်းလွင်၏ Myanmar Climate Change Watch (MCCW) အင်တာနက်စာမျက်နှာကို ဟက်ကာများက ဖောက်ထွင်းမှု ပြုသွားသည်။
MCCW ဆိုဒ်အတွင်းသို့ ဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်၍ Blink Hacker Group (BHG) မှ သတိပေးစာကို စာမျက်နှာပေါ်သို့ တင်ထားပုံ (Photo :: http://www.tunlwin.com/) MCCW ဆိုဒ်အတွင်းသို့ ဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်သည့် Blink Hacker Group (BHG) က လျှို့ဝှက်စကားလုံးများအား စာသားသီးသန့်ဖြင့် မှတ်သားထားသောကြောင့် အသုံးပြုသူများ၏ လုံခြုံမှုကို ထိခိုက်သည်ဟုဆိုကာ MCCW ဝဘ်ဆိုဒ်တွင်းသို့ ယခုလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ကြာသပတေးနေ့တွင် သတိပေးစာကို စာမျက်နှာပေါ်သို့ တင်ပို့ခြင်း ဖြစ်သည်။
မောင်ချိန်းဆိုထားသည့် ကော်ဖီဆိုင်ကိုရောက်တော့ မောင်ကမရောက်သေး။ ချောကလက်ရှိတ် အရင်မှာလိုက်သည်။
ဒီဆိုင်လေးက ကျွန်မ နှင့်မောင်တို့ စပြီးချစ်သူဖြစ်ခဲ့သည့်ဆိုင်လေး။ မောင်နှင့် အိမ်ထောင်ကျပြီး နောက်ပိုင်းလဲ ဒီမှာ မကြာခနလာထိုင်ဖြစ်ကြသေးသည်။ ဆိုင်အပြင်အဆင်လေးက သားနားသည်။ ဒီဆိုင်က ကာပူချီနိုကော်ဖီကို မောင် နှစ်သက်စွာ သောက်လေ့ရှိသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ကျွန်မတို့ ဒီဆိုင်လေးမှာဆုံကြပြီး သမ္မတရုံမှာ ရုပ်ရှင်တူတူကြည့်လေ့ရှိသည်။ သူငယ်ချင်းတွေ သိသွားလျှင် အချစ်ဟင်းအိုးပြန်နွှေးကြသည်ဟု စတတ်ကြသည်။
Author: lubo601 | 10:19 AM | No မှတ်ချက် |
သင့်ရဲ ရင်သွေးငယ်လေးတွေ အောင်မြင်မှုတစ်ခုခု လုပ်လာတိုင်း ၊ မိဘကို ကူညီတိုင်း သင်ဆုချီးမြှင့်ဖူးပါသလား။ သူတို့ ရဲ့ ဝေယျာဝစ္စလေးတွေ သူတို့ကိုယ်တိုင် လုပ်ပေးတိုင်း သင် သူတို့ကို ငွေသားဖြစ်စေ ၊ လက်ဆောင်ပစ္စည်း တစ်ခုခုဖြစ်စေ ဆုအနေနဲ့ ပေးခဲ့ ဖူးပါသလား။
ကျောင်းက သင့်ကလေးတွေအတွက် ဂဏန်း သင်္ချာတွေ ၊ အတွက် အချက်တွေ ၊ ဂဏန်းသင်္ချာပုစ္ဆာ တွေကို ဘယ်လို ဖြေရှင်းမလဲ ဆိုတဲ့ ချဉ်းကပ်နည်းတွေ သင်ပေးပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်လည်း ကလေးတွေ သူတို့ရဲ့ ငွေကြေး ကို ဘယ်လို အကျိုးရှိစွာ စီမံခန့်ခွဲပြီး အသုံးပြုမလဲဆိုတာ သင်ပေးမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလို ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုကို ငယ်ငယ်ကတည်းက မသင်ယူခဲ့ကြရတဲ့ အတွက် အတော်လေး အရွယ်ရောက်တဲ့ အခါမှာ အမှားတွေနဲ့ စမ်းသပ်မှုတွေ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
မနေ့ညက လေပြင်းမုန်တိုင်း ထန်ခဲ့သဖြင့် အိမ်အမိုးများ အတောင်မပေါက်ဘဲ ပျံသွားကြသည်။ အိမ်နံရံများလည်း ကွာသည့်နေရာကွာ ပဲ့သည့်နေရာ ပဲ့ကျကုန်သည်။ အိမ်တစ်အိမ်၏ ၀ိသေသလက္ခဏာများ ချို့ယွင်းပျောက်ဆုံးကာ နေလို့ မဖြစ်တော့၍ အမြန်ပြုပြင်မှဖြစ်တော့မည်။ သို့သော် လူအင်အား၊ ငွေအင်အား စသည့် အရင်းအမြစ်များ လိုအပ်သည်။ အိမ်ရှင်မှာ သူ့ပိုင်အိမ်ဖြစ်ငြား မျက်နှာလွှဲခဲပစ်နိုင်လှသည်။ အိမ်လခရလျှင်ပြီးရော ဆိုသည့် လူစားမျိုး။ အိမ်မှာနေသည့်လူတွေ ဘာဖြစ်ဖြစ် စိတ်ဝင်စားမည် မဟုတ်ပါ။
စန္ဒီမေ | အင်္ဂါနေ့၊ မတ်လ ၀၁ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၂၃ နာရီ ၃၉ မိနစ်
တမာရနံ့၊ ထနောင်းပင် ရနံ့တို့က ဒါအညာပါလို့ ပြောနေသလို ဘေးဘီ ဝဲကြည့်လိုက်တဲ့ မြင်ကွင်းတိုင်းကို ဂူ၊ ဘုရားပုထိုး၊ စေတီတွေနဲ့ ပုံဖော်ထားပုံက ဒါ ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်တွေ စုဝေးတဲ့ ပုဂံပဲလို့ တွေးရင်း …….
မြင်းလှည်း ငှားမလို့လား၊ ပြောပါ။ သူများဈေးထက် လျှော့ပေးပါမယ်လို့ ပြောလာတဲ့ မြင်းလှည်းဆရာကတော့ အသက် (၆ဝ) ရွယ် ဦးအောင်မြင့် ဆိုသူပါပဲ။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် သဘောတူတဲ့ ဈေးနှုန်းနဲ့ သွားလိုတဲ့နေရာကို စသွားဖြစ်ပါတယ်။ မြင်းလှည်းပေါ် ရောက်လို့ စကားစမြည် ပြောမိတဲ့အခါ ဘယ်တုန်းကပြောချင် (ရင်ဖွင့်ချင်မှန်းမသိ) တရပ်စပ် ပြောဆိုပုံကတော့“ ကျနော့ဇာတိက ဒီပုဂံကပါပဲ၊ တောင်ဘီရွာမှာနေတာ အရင်က မြင်းလှည်း မမောင်းပါဘူး။ ရှေးဟောင်း သုတေသနက ဝန်ထမ်းပါ” ဆိုပြီး သူ့စကားကို ခဏရပ်လိုက်ပါတယ်။
ဟောဒီမြို့မှာ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းလမ်းတို့၊ ရှင်စန်္ဒိမာလမ်း၊ အာဇာနည် လမ်းတို့ကို မြို့နေပြည်ထိုင် ပုဂ်္ဂိုလ်တိုင်း သိမီကြတယ်။ အထင်ကရ လမ်းကြီးတွေ ဟုတ်လား။
အဲဒီ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လမ်းပေါ်မှာ ဆိုင်တွေ၊ ကနားတွေ အများကြီး။ ရွှေဆိုင်တွေလည်းရှိတယ်။ ကျောက်မျက်ရတနာ အရောင်း ဆိုင်တွေလည်း ရှိကြတယ်။ ပုဂ္ဂလိက ဘဏ်တိုက်တွေရော၊ စားသောက်ဆိုင်တွေရော၊ ရုပ်ရှင်ရုံတွေရော၊ စတိုးဆိုင်တွေရော၊ ဖိနပ်ဆိုင်တွေ၊ နာရီ အရောင်းဆိုင်တွေ၊ ဘာလိုချင်သလဲ ဟောဒီ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လမ်းပေါ်မှာ အကုန်ရတယ်။
ဥပမာဗျာ - ဆရာတော် ဦးဝိစာရထင်တာပဲ။ လိမ္မာရစ်ကျပါလို့မှာတယ်။ ဆရာဗန်မော်တင်အောင်က “လူတယောက်ရဲ့ တန်ဖိုးဆိုတာ -” အစချီပြီး သမိုင်းတွင်လောက်တဲ့စကားကို ပြောခဲ့တယ်။ ကျနော် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝက စာကြည့်စားပွဲရှေ့မှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြောတဲ့ “လူတယောက်မှာ အရေးအကြီးဆုံးဟာ ကိုယ်ကျင့်တရားနဲ့ အမှန်တရားကို မြတ်နိုးမှု” ဆိုတာကို ကပ်ထားဖူးတယ်။ ကျနော့်သူငယ်ချင်း ကဗျာဆရာတယောက်က ဘုရားပုံတော်မှာ “ဆိတ်ကွယ်ရာ၌ပင် မကောင်းမှုကို မပြုလုပ်သူ” ဆိုပြီးရေးထားတယ်။ ဂုဏ်တော်ကိုးပါးထဲက သူအကြည်ညိုဆုံးဂုဏ်တော်ကို ရေးထားတာလို့ပြောတယ်။ သူကိုးကွယ်လိုက်ပုံက ရှင်းတယ်။ ဘာကျမ်းကိုးကျမ်းကားမှမပါဘူး။
Debate(စကားရည်လုခြင်း) နဲ့ Dialogue(အပြန်အလှန်ပြောဆိုဆွေးနွေးခြင်း)
Author: lubo601 | 9:47 AM | No မှတ်ချက် |
ကိုယ်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကို အသာရဖို့ စကားစစ်ထိုးရာမှာ အသာစီးရဖို့ ရည်ရွယ်တယ်။
ကြားရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ပြန်လည်ချေပဖို့ နားထောင်တယ်။
အမှားရှာပြီး သူတစ်ပါးသေးသိမ်သွားအောင် တန်ဖိုးလျှော့စေရန် နားထောင်တယ်။
သူတစ်ပါးအနေအထားနဲ့ စေ့စော်မှုတွေကို ကိုယ်စိတ်ထင်သလို ကောက်ချက်ချပြောတယ်။
ခလုတ်တိုက်အောင် စိတ်ရှုတ်ထွေးအောင် မေးခွန်းတွေမေးတယ်။
တခြားသူတွေရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေဟာ ပုံမကျ အရာမ၀င်လို့ ဝေဖန်တယ်။
ခံစားချက်ပြပြီး အခြားသူတွေ ကိုယ့်ဘက်ပါလာအောင်ဆွဲဆောင်တယ်။ အခြားသူတွေရဲ့ ခံစားချက်တွေကို မမှန်ကန်ဘူးလို့ ငြင်းဆိုပယ်ချတယ်။
Author: lubo601 | 9:26 AM | No မှတ်ချက် |
[By Thant Syn]
ချင်းမိုင် (မဇ္စျိမ) ။ ။ လွှတ်တော်ထဲ မေးမြန်းမည့် မေးခွန်းများနှင့် အဆိုများသည် မဆွေးနွေးမီ ပြည်ပမီဒီယာများသို့ ကြိုတင်ပေါက်ကြားခဲ့သဖြင့် အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်အောင်မြင့်က ပယ်ဖျက်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း လွှတ်တော်တက် အမတ်များထံမှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
“ဦးခင်အောင်မြင့် ပြောတာက တချို့ဟာတွေက ကောင်းတယ်တဲ့၊ သင့်တော်တဲ့ အဆို...တွေဖြစ်တယ်တဲ့။ တချို့ဟာတွေက လွှတ်တော်မှာ တင်သွင်းဆွေးနွေးမှုတွေ မလုပ်ရသေးဘဲနဲ့ အပြင်မီဒီယာတွေကို ရောက်နေတဲ့အတွက် အဲဒါတွေကို ဖြုတ်လိုက်တယ်တဲ့။ ဘယ်ဟာ ပယ်ဖျက်တယ်တော့ မပြောဘူး” ဟု လွှတ်တော်အမတ်တဦးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ဘာသာရေးအဆုံးအမများ ( ၀ီရကြယ်စင် )
၁။ “ အတ္တဒီပါ ၀ိဟာရထ ၊ အတ္တသရဏာ အနညသရဏ ။ ”
( မဟာပရိနိဗ္ဗာနသုတ် )
: Be an island unto yourselves! Beaarefuge unto yourselves.
Do not depend upon others.
: မိမိကိုယ်ကို ထောက်တည်ရာကျွန်းသဖွယ်ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပါ ။
မိမိကိုယ်ကို အားကိုးအားထားစရာဖြစ်အောင်လုပ်ပါ ။
တခြားတပါးသောသူကို ကိုးကွယ်အားထားစရာ မဖြစ်ပါစေနဲ့ ။
တခြား ဘယ်သူ့ကိုမှ အားမကိုးပါနဲ့ ။
* Posted by KaeKae0 on October 20, 2010 at 1:53pm
ဟိုင်းလပ်များဆိုလို့ ကားအကြောင်းဟုထင်လျှင်မှားမည်။ လူအကြောင်းဖြစ်သည်။ လူအကြောင်းမှ အသက်အရွယ်အရ၊ အနေအထားအရ အချိန်တန်နေပေမယ့် ရင်ခုန်သံဖြည့်ဘက် နေရာမှာလစ်လပ်နေသေးတဲ့ လူပျို(ကြီး)၊ အပျို(ကြီး) တွေအကြောင်းဟုဆိုလျှင် ပို၍တိကျပေမည်။ အသက် ၃၀ တန်းတွေဆိုတော့ အရွယ်လွန်နေပြီဟုမဆိုသာသော်လည်း၊ ဝါးနီးပွိုင့် (warning point) ကိုရောက်နေပြီဆိုတာကိုတော့ လက်ခံရပေတော့မည်။ အရွယ်လွန်တာမဟုတ်တော့ အရွယ် ဟိုင်း တာဟုဆိုနိုင်သည်။ အခုလို ဟိုင်း လာတဲ့ အရွယ်မှာ ရင်ခုန်သံတစ်ခြမ်း လစ်လပ် နေသေးတဲ့သူတွေမို့ ဟိုင်းလပ် များဟု တင်စားလိုက်ရခြင်းဖြစ်တော့သတည်း…။
Author: lubo601 | 8:50 AM | 1 Comment |
လူတစ်ယောက်မိခင်များနေ့မှာနှင်းဆီပန်းလေးတွေကိုဖဲကြိုးလှလှလေးတွနဲ့စည်းပြီးဈေးအ၀မှာသွားရောင်းတာနေမွန်းမတည့်ခင် ပန်းအားလုံးရောင်းလို့ကုန်သွားပြီးငွေငါးဆလောက်အမြတ်ရခဲ့တယ်၊ ဖခင်များနေ့ရောက်တောဲ့ဒီလူကအဲဒီနည်းအတိုင်းပန်းကလေးတွေရောင်းခဲ့ပြန်တယ်။ နေစောင်းတဲ့အထိလေးပုံပုံတစ်ပုံတောင်ရောင်းမထွက်လို့ငွေရှုံးပြီးအိမ်ပြန်ခဲ့ရတယ်။
Author: lubo601 | 8:44 AM | No မှတ်ချက် |
ဂျူး - Ju
အားလုံး မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်ကတော့ ဂျူး - Ju Page ရဲ့ Admin တစ်ယောက်ပါ။
မနေ့ညက ပြောခဲ့သလိုပဲ ကျွန်တော် အားလုံးကို ကြေငြာစရာ သတင်းစကားတစ်ခု ရှိပါတယ်။ ဒီသတင်းစကားကို ကြေငြာ ရုံသက်သက် မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ Fans အားလုံးရဲ့ ဒီသတင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အမြင်၊ သဘောထား၊ ခံစားချက်၊ ပါဝင်ပတ်သက်လိုမှု အားလုံးကို ကျွန်တော် မျှော်လင့်ထားပါတယ် ခင်ဗျာ။ ဒီသတင်းဟာ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အိပ်မက်တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ Page ရဲ့ အောင်မြင်မှု လို့လည်း ခံစားလိုက်ရပါတယ်။
အဲ့ဒီအိပ်မက်ဟာ ဆရာမရဲ့ စာအုပ်အသစ်နဲ့ အတူတူ မွေးဖွားလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးကို ကျွန်တော်တို့ ပြောကြားခဲ့သလိုပဲ ဒီနှစ်အစောပိုင်းမှာ ဆရာမရဲ့ စာအုပ်အသစ်ထွက်မယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်လ တစ်လနဲ့ ခုဆို ၃ လပိုင်းထဲ ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။ Fans တွေ မျှော်လင့်ထားသလိုပဲ ကျွန်တော်တို့လည်း ဆရာမရဲ့ စာအုပ်အသစ်ကို ဖတ်ချင်နေပါပြီ။ ဒါကြောင့် ဆရာမကို ဟောပြောပွဲတွေမှာ တွေ့တိုင်း မေးခဲ့ပါတယ်။ ခုတော့ သေချာတဲ့သတင်းအရ ဒီလကုန်မှာ ဆရာမရဲ့ စာအုပ်အသစ် ထွက်ရှိလာတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စာအုပ်အမည်ကိုလည်း Fans တော်တော်များများက သိပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာမရဲ့ လုံးချင်းဝတ္ထု အသစ်ရဲ့ အမည်က “ပိုချစ်ရတဲ့သူ ကိုယ်ဖြစ်ပါရစေ” တဲ့ဗျ။
စင်ကာပူ မြေပေါ်မှ အလွဲများ ၁
Author: lubo601 | 8:40 AM | No မှတ်ချက် |
* Posted by Lynn Htet Sandar on February 7, 2011 at 8:37am
တစ်နေ့ ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်းတစ်စု မွေးရပ်မြေ မြန်မာနိုင်ငံကို ခွင့်ဖြင့် အလည်ပြန်သွားရာမှ ပြန်လာသော ကျွန်တော်တို့ ၏ ဘော်ဘော်ကြီး ညိုကြီးကိုကြီးအား လေယောဉ်ကွင်းမှ ကြိုပြီး အပြန် Boon Lay မြို့ ရှိ Kopitiam တွင် သောက်ရင်းစားရင်း မွေးရပ်မြေသတင်းများကို ညိုကြီးကိုကြီး အားဝိုင်း၍ မေးမြန်းကြသည်။ မေးသာမေးရသည် သိပ်တော့အားမရ ဒီလူက စင်ကာပူတွင်သာ ခြေတိုအောင် လျှောက်သွားနေသော်လဲ ဆင်တဲ သို့ပြန်ရောက်လျှင် အိမ်ထဲက အိမ်ပြင် သိပ်ထွက်ရသည် မဟုတ်။ညိုကြီးကိုကြီး ကလဲ ပြောဘူးသည်။ငါအိမ်ပြန် ရောက်ရင် ဘယ်ကိုမှ မသွား ချင်ဘူး။ ’ဘကုန်း’ တွေနဲ့ လွတ်လွတ် ကင်းကင်း နေချင်တယ်။ အိမ်ပြင် ထွက်ဖို့ ခြေလှမ်းပြင်တာနဲ့ဒါက ဘယ်လဲ.. ဘာကြောင့်သွား…ဘယ်သူနဲ့…ဘယ်လောက်ကြာလို့ … ဘယ်အချိန်… ဆိုတဲ့ အမေး တွေကို ပြန်မဖြေချင်ဘူး လို့ ပြောဘူးတယ်။
Posted by Lynn Htet Sandar on December 18, 2010 at 4:17am
Send Message View Lynn Htet Sandar's blog
ကျွန်တော်သည် ကျွန်တော့် အိမ်ကလေးကို အလွန် မြတ်နိုးပါသည်။ Home Sweet Home ဆိုသည့် စကား ကိုယ့်အိမ် ကိုယ့်ရာဟာ အချိုမြိန်ဆုံး ဆိုတာ ကမ္ဘာသုံး စကားသုံးမို့ ထပ်ပြောရတာ အားနာပါသည်။
နော့ပေတည့် ယခုပြောမည့် ကျွန်တော် အိမ်အကြောင်းမှာ တစ်မျိုးတစ်မည် ရှုထောင့်မို့ ပြုံးချင့်စဖွယ် ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ ကျွန်တော်သည် ကျွန်တော့် အိမ်အကြောင်း အက်ဆေး ၃ ပုဒ်လောက် ရေးဖူးပါသည်။ ပထမ အပုဒ်က ကျွန်တော့် အိမ်သည် စာရေးဆရာ အိမ်စစ်စစ် ဖြစ်ကြောင်း ဖြစ်ပါသည်။ ပြန်၍ နှူးရပါမူ ထိုအိမ်ဆောက်သော ကာလမှာ ၁၉၈၀ ဖြစ်သောကြောင့် ဆိုရှယ်လစ် ခေတ်ဖြစ်သဖြင့် လူသုံးကုန် ပစ္စည်းများ ပြည်သူ့ဆိုင်မှာ ၀ယ်ရပါသည်။
မြန်မာဆိုရင် ဖတ်ကြည့်ပါ (သို့) အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်
Author: lubo601 | 8:32 AM | No မှတ်ချက် |
Posted by TheCrow on June 20, 2010 at 1:14pm
၁။ နိုင်ငံနဲ့ လူမျိုးအတွက် ရဲ့ သိက္ခာကို မြှင့်တင်ဖို့ (မိမိကိုယ်တိုင်
စိတ်ဓာတ်မြှင့်တင်ခြင်းဖြင့် ဒီအချက်ကို လုံးဝ ပြည့်စုံနိုင်ပါတယ်)
အဓိက အချက်အလက်နဲ့ကတော့ ဒီ ၂ ချက်ပဲ ဦးတည်ပြောချင်ပါတယ်။
လူတစ်ယောက်ရဲ့ ပထမဆုံးအသိုင်းအ၀ိုင်းက မိသားစုပါ ၊ နောက်တစ်ဆင့်က
သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းနဲ့ ဆွေမျိုး ၊ နောက် ပတ်ဝန်းကျင် ၊ နောက်ပြီး ရပ်ကွက် ၊
မြို့နယ် ၊ တိုင်း ၊ နိုင်ငံ စသဖြင့်အဆင့်ဆင့် ချစ်ခင်ရမယ့် မြတ်နိုးရမယ့် အဆင့်တွေ
ရှိပါတယ်။ ဒါဟာ မပြောပဲနဲ့ သွေးသားထဲက သိရမယ့် အသိတရားပါ။ ဆိုလိုချင်တာက
မိသားစုဝင်နဲ့ သူငယ်ချင်းယှဉ်လာရင် ကိုယ့်သွေးသားရင်းကို ဦးစားပေးရမယ်လေ။
အဲ့လိုပဲ တစ်ဆင့်စီ ပြောလိုက်ရင် နောက်ဆုံး ကိုယ့်နိုင်ငံကနေ
ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ သိက္ခာကို မြှင့်တင်ရမယ် အဲ့ဒါက တကယ်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့
အရည်အချင်းကို မြှင့်တင်ဖို့က အဓိကပါပဲ။ အဓိက ပထမအကျဆုံးကတော့
မိမိကိုယ်တိုင်ရဲ့ သိက္ခာကို တန်ဖိုးထားပီး အရည်အချင်းကို မြှင့်တင်ပါ။
နောက်ထပ်ပြီး ကျနော်ပြောချင်တဲ့ အဓိက အကြောင်းအရင်းကို ပြောပါတော့မယ်
ပြည်ပရောက်နေတဲ့ မြန်မာတွေက မြန်မာလူမျိုးချင်းဆို
မပြေလည်တာတွေ ပြသနာတက်တာတွေ အမြဲကြားရတယ်။ အဲ့ဒီလူတွေ နိုင်ငံခြားသားနဲ့
သွားနေရင်တော့ အရမ်းကို အဆင်ပြေတာပဲ။ ကျနော် မြင်တာကတော့
လူမျိုးချင်းနေတာဆိုရင် ကျနော်တို့ မြန်မာလူမျိုးသဘာဝအတိုင်း ကိုယ့်လူရင်းတွေနဲ့
ဆိုရင် အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နေတာလေးတွေ ရှိတတ်ပါတယ်၊ အဲလိုနေတာလေးတွေက
စည်းကမ်းမဲ့တာ ဖြစ်လာပီးတော့ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ မပြေမလည် ဖြစ်လာတတ်ပါတယ် ။
အဲ့တော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် သတိနဲ့ ထိန်းသိမ်းဖို့ က နံပါတ်တစ် သူများကို နားလည်ပေးရမယ်
ဆိုတာက နံပါတ် ၂ ပါ ၊ ၂ချက်လုံးလိုအပ်ပါတယ်။
နောက်ပြီးတော့ ပြည်ပကို ရောက်နေတဲ့သူတွေက လမ်းမှာ
မြန်မာစကားပြောနေရာကနေ တစ်ခြားမြန်မာတစ်ယောက်ဖြစ်စေ ၊ မြန်မာတွေနဲ့ ဖြစ်စေ
ကြုံဆုံလာရင် မြန်မာဖြစ်တာကို ကွယ်ဝှက်ဖို့ ကြိုးစားကြတာကို ကမ္ဘာ့နေရာအနှံ့အပြားက
သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ ငြီးညူသံတွေ ကြားရပါတယ်။ ဒါအင်မတန်မှ
ရှုတ်ချစရာကောင်းတဲ့ကိစ္စပါ။ မြန်မာလူမျိုးဖြစ်ရတာ ရှက်စရာကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။
ဂုဏ်ယူတတ်ကြပါ။ တစ်ခြားလူမျိုးတွေရဲ့ ကောင်းကွက်ဆိုးကွကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ကြဦး ၊
ကွယ်ဝှက်ဟန်ဆောင်တဲ့လူတွေတွေ့ဖူးလားလို့။ နောက်ပီးတော့ မိမိကိုယ်မိမိကြိုးစားပီး
သိက္ခာမြှင့်တင်ရုံနဲ့ နိုင်ငံနဲ့ လူမျိုးကိုလဲ ဖေးမရာရောက်ပါတယ်။ နားလည်သင့်ပါတယ်
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတိုးတက်လာရင် နိုင်ငံသားတွေက သာအဓိကအကျိုးခံစားရတာပါ။
ဘယ်လောက်ပဲ သူများနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံသားခံခံ ဒုတိယဦးစားပေးအဆင့်မှာပဲရှိပါတယ် (ဒါက
နိုင်ငံသားခံယူခွင့်ရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကို ပြောတာပါ) ။
သမားတော်ဆရာလေး မဟာမွတ်၏ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အကျဉ်းနှင့် ...
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တ...
Face Book မှ သိလိုက်ရသော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကို ဂျပန်တေ...
ဆြာသူရဿဝါ၏ မော်ဒန်နည်းကျ အိုင်တီအင်တာနက် ရှေ့ဖြစ်ေ...
blog တွေ၊ wiki တွေ ကိုယ်ပိုင် ဒိုမိန်းတွေနဲ့ အုပ်စ...
ရန်ကုန်မြို့ ကမာရွတ်မြို့နယ်ရှိ နေအိမ်တစ်အိမ်မှ ပစ...
၀က်ရူးပြန်ရောဂါ (သို့) အတက်ရောဂါ နှင့်ရုတ်တရက်အသက်...
"သခင်အောင်ဆန်း က "လူညံ့စိတ်ဖျောက်ပြီး၊ နိုင်ငံရေးက...
ရာသီမလာခင် ဖြစ်ချင်တာတွေ Premenstrual syndrome (...
ဖောင်ဒေးရှင်းတည်ထောင်လိုသော ပရဟိတသမားများ အလေးထားစ...
Debate(စကားရည်လုခြင်း) နဲ့ Dialogue(အပြန်အလှန်ပြော...
မဲဆောက်က မြန်မာပြည့်တန်ဆာမိန်းကလေးများရဲ့ သနားစရာ ...
၁၀ နှစ်လောက် ငယ်ရွယ်နုပျိုသွားစေမည့် အလေ့အထများ
လယ်သမား နစ်နာမှုများနှင့် သပိတ်လက်နက်